kaaha qoraalka hogaamiyaha caafimaadka iswiiska
Ku qoran 18 luqadood
Sharaxaad kooban oo ku saabsan daryeelka caamfimaadka iswiiska –
La taliyaha bulshada ajaanibta qurba-joogta iswiiska
Akhbaar wacyigalina ee daryeelka caafimaadka
oo loogu tala galay ajaanibta qurba joogta:
migesplus.ch – Akhbaaro iyo wacyigalin ku saabsan
daryeelka caafimaadka kuna qoran luqado badan ee
Werkstrasse 18, 3084 Wabern
Telefon 031 960 75 71
www.migesplus.ch, [email protected]
Wirwirka sumadaha macluumaadka, iyo maaxdinta dajinta qoraalka
Cussayb dib u jadiidin cassriyeysan oo kaamila iyo
dib u daabicidii 3
Qorshaha hindisaha allifaada iyo dhigidda qoraalka:
Bandhigaada iyo soo saaritaanka qoraalka:
Abteilung Gesundheit, Werkstrasse 18
3084 Wabern, Telefon 031 960 75 75
www.redcross.ch, [email protected]
Bayaaminta ku sifaysan tusaalooyinka sawiran:
Nationales Programm Migration
Hessstrasse 27E, 3097 Liebefeld
Telefon 031 323 30 15, www.bag.admin.ch
Turjumaada qoraalka: B. M.
Abaabulka isku-dubaridka daabacaadda:
visu’l AG, Bern
Daabacaada & naqshadda:
Alscher Text & Design, Interlaken
Ka dalbashada khadka Internedka
Bestellung Internet: www.migesplus.ch
BAG-Publikationsnummer: GP 30EXT1108
Maamulka xarunta qeybinta iyo dalabaadka qoraalka :
BBL, Vertrieb Bundespublikationen, CH-3003 Bern
Lagu daabacay nooca xanshiyaha farsamada iyo
sancada loo yaqaan (FSC)
Horudhac – Arareed
Hadii qandho iyo xanuun aan isku arko ama aan shill dhaawac galo, halkee
i qaabilsan oon la xiriiri karaa? Iswiiska daawaynta iyo daryeelka caafimaadku ma bilaash baa, mise waxaan ku qasbanahay in aan qarsh lacageed bixiyo? Hadii si kadis ah, oo lama filaana, cudur iigu soo boodo, oo
arin gurmad caafimaad u baahan ila soo gudboonaato, tallaabooyinkee iyo
ficilkee la iiga baahanyahay in aan ku dhaqaaqo? Waa kuwee adeegyada
caymmisyada daryeelka caafimaadka aan u baahnahay? Sideen cudurada
iyo jirada uga hortagi karaa, oon uga gaashaaman karaa? Adeega xogta
qoraalada wacyi-galinta iyo ogaysiisyada akhbaaraha daryeelka caafimaadka oo luqadayda hooyo ku qoran kuna daabacan sideen ku hanan
karaa oo ku heli karaa?
Daabacaada buugan yar, iyo qoraalkan hogaamiyaha caafimaadku, wuxuu
kaaga jawaabaya suua`alahan kor ku xussan iyo kuwo la mid ah oo fara
badan. Adeega qoraalkan hogaamiyaha caafimaadka, waxaa daabacaadiisu iyo soo saarida bandhigaadiisu ku soo baxday, dalabka iyo amar ka
yimid maamulka sare ee wasaarada caafimaadka, iyadoo waaxdiisa urrurka laan-qaybta cass ay fidinta is-balaarintiisa iyo abaabulka dhaqan galinta, hormarsiintiisa iska xilsaartay, qasdigeeduna doonaysay in bulshawaynta ajaanibta iyo qurba joogta dagan iswiiska in ay irrid iyo dariiq ay ku
soo galaan u sahahasho una furto sida masalana ay ku heli-lahaayeen
adeegyada maamulkeena guud ee daryeelka caafimaadka adeega maamulda caymisyada bukaanka, iyo adeega caymisyada qaabilsan shilalka
ama maamulada qaabilsan howlaha horumarinta mashruucyada caafimaadka iyo ka hortagida ciribtirka cudurada. Fahmida qaabka uu u dhisanyahay maamulka daryeelaka caafimaadka iswiisku, waa mid aad u adag
una qalafsan oo xitaa mawaadiniinta dalka u dhashay aysan u sahlanayn
garashada fahamkiisu iyo sida uu u shaqeeyo. Marka bulsha waynta ajaanibta ee wadanadooda maamulada daryeelka caafimaadka ka jira ku soo
indhadilaacsaday oo kuna soo barbaaray, aad bay ugu adagtahay markiiba
daryeelka caafimaadka iswiiska in ay fahmaan oo la qabsadaan lana jaanqaadaan. Hadaba adeega kitaabkaan marin hagaha iyo kaaha qoraalka
hogaamiyaha caafimaadka wuxuu iyadoo la soo koobay kuu fasirayaa
adeegyada maamulada daryeelka caafimaadka iswiiska qaabilsan intooda u muhiimsan, isagoo kuu raacinaya kuna lifaaqanyihiin cinwaanda munaasabka ah, ee adeegyada xarumaha daryeelka caafimaadka qaranka.
Qoraalka buugan wuxuu ku soo caan baxay muddadii dheerayd guulihii
laga gaaray daabacadiisa waana lagu munaafacsaday, hadaba soo saaridda cadadkan cusub waa daabacadiisii sadexaad oo bulshada loo soo
bandhigo, iyadoo guud ahaanba dib u cusboonaysiin buuxda iyo dib u jadiidin lagu sameeyey.
Qasdiga noogu wayn waa in aan dadka iswiiska dagan wacyi-galino, anagoo ogaysiinayna, oo fahamsiinayna habka ay ku heli karaan adeegyada
haqabtirka daryeelka caafimaadka, iyo adeegyada maamulada qaabilsan
oo ay kala xiriiri karaan hadii ay dhibaatooyin caafimaad darro soo food
saarto, iyadoon loo eegayn jinsiyadahooda ama sharciyada waraaqaha ay
Waxaan qormada kitaabkan kuu rajaynayaa akhris iyo daraasaad xiiso
leh,iyo sixo caafimaad oo aad u wanaagsan.
Agaasimaha sare ee maamulka wasaarada caafimaadka qaranka.
Tusmada fahraska iyo casharada kitaabku
Horudhac arareed 1
Habkeen u isticmaalaa kitaabkan qoraalkan
hogaamiyaha barashada maamulka daryeelka
Qaabkee iyo habkee baan caafimaad
qab ugu waari karaa?
Nafaqayeysiga raashin qorshe sixo
caafimaad ku salaysan iyo caadaysiga
dhaqdhaqaaqa xarakaakaadka jismiga 6
Iyadoo la iska ilaaliyo dhuuqidda isticmaalka
sakareedka iyo buuriga, la iskana dhowro, iyo
cabitaanka khamriga alkolada oo la dhimo lana
Ka foojignaanta laga gaashamanayo oo la
iska-difaacayo iyo ka hortagida cudurada
falalka galadamad la isku daarto oo la isu-gudbiyo waliba cudurka dilaaga daciifiya oo naxuusiya difaaca jirka loona yaqaan HIV / Aids 13
Baaritaano caafimaad oo taxaddar iyo hubsiino
daradeed la sii qadimanayo oo la iska sii
qaadayo lana sii hormarsanayo
Adeega daryeelka caafimaadka maskaxda iyo
farsamada cilmu-nafsiga oo lagu daaweynayo
quluubta iyo ogaalka shucuurta gudaha
Qaabkee iyo farsamadee ayuu u
shaqeeyaa adeega caymiska khasnada
Adeega maamulka khasnada bukaanka
Adeega maamulka caymiska shillalka
iyo nafanimada curyanimada qaabilsan 18
Qaabkee iyo farsamadee ayuu adeega
daryeelka daawaynta caafimaadku u
Xarrunta tachtarada ama tachtarka
qoyska ee xaafada Dukaanka maamulka daawada loona
yaqaan farmashiyaha 29
Tachaatiirta cudurada maskaxda iyo quluubta la
xiiriira qaabilsan iyo farsamada daawayntooda
qalbiga insaanka iyakoo adeegsanaya
camaliyada cilmiga cudur shaafisada loo
yaqaan (threpie) 36
Daryeelka daawaynta tachaatiirta ilkaha
Daryeelka gargaarka iyo adeega gurmadka
badbaadada deg degta ah
Ku sugnaanshaha isbitaalka
Daryeelka daaweynta xaamilada iyo
Daryeelka iyo daawaynta baxanaanada
guriga iyo xannaanada isbitaalka una adeega
bukaanka oo soo siyaarta, loona yaqaan
bukkaan kor kormeerka: Spitex
Adeega daryeelka iyo daawaynta
Marka aan xannuunsanayo oon
bukko, waa maxay xuquuqdayda ama
Dhadig marwo ahaan iyo labood mudane
ahaan marka aan buko xuquuq maxaan
u leeyahay? 60
Marwo ahaan ama mudane ahaan markaan
jiranahay, waa maxay wajibaadkaygu? 63
Adeega turjubaanimo dhaqameedka u
kala tarjuma dhaqamada kala duwan iyo
Ishaarooyin tussaaleed iyo ogaysiisyo
tilmaameed oo loogu tala galay
bulshada ku diiwaangashan qaxootinimada iyo kuwa aan meelna ka
tirsanaayn oon laga qoral galin ama
ka diinwaangashanayn, loona yaqaan
Bulshada qaxootinimada dalbatay oo hab
ku meel gaara loo qaabilay, una baahan
magangalyo amman galina in ay helaan Bulshada aan la diinwaan galin oon sharciyeysnayn loona yaqaan (Sans-Papiers) 67
Qaabkee iyo farsamadee ayaan u
isticmaalaa oo u adeegsadaa
qoraalkan iyo kitaabkan hogaamiyaha
Qoraalka kitaabkan kaaha hogaamiyaha daryeelka caafimaadka wuxuu
kuu horseedayaa kuna siinaayaa akhbaaraha macluumaadka ugu muhiimsan oo ku saabsan adeegyada wacyigalinta qaranka ee maamulka daryeelka caafimaadka iswiiska. Qoraalka waxaad ka dhex helaysaa uuna ka
koobanyahay ogaysiisyo wacyigalina iyo tilmaamo warbixineed oo kuu
sharaxaya farsamooyinka iyo nidaamka la adeegsado si sixada caafimaadka kor loogu qaado oo lagu hormariyo, ama qorshayaasha ku saabsan farsamooyinka loo adeegsado la dagaalanka ka hortagida iyo cirib-tirka cudurada, ama xogta akhbaaraha adeegyada howlaha caymisyada bukaanka
qaabilsan, ama maamulka caymisyada shilalka, ama rag iyo dumarba xeerarka ka dajisan oo ka yaala xuquuqda iyo waajibaadka bukaanka.
Madaama aad shaqsi ajnabiya aad tahay, oo wadanka dagaan ahaan u soo
guuray, ayaa waxaa dhici karta in dhibaatooyin iyo mashaakil is-faham
la`aana iyo is-afgarasho la`an ay kaa haysato, habka aad ula mucaamaloon
lahayd ama qaabka aad u fahmi lahayd ood ula dhaqmi lahayd dhakhaatiirta iyo shaqaalaha adeegyada daryeelka caafimaadka qaabilsan. Hadii ay
jiraan waxyaabo ay mugdi kaaga jiraan ama aadan si waadixa oo buuxda u
fahmin ha ka xishoon sua`aalo waydiinta oo waliba weydii oo xog warayso
hadii ay fursadda kuu furantahay lagu heli karo adeega turjubaan dhaqameedka qaabilsan is-fahamsiinta dhaqanada kala duwan.
Qoraalkan waxaad ka dhax helaysaa astaamo iyo calaamado kala duwan
oo loogu tala galay in ay kuu muujiyaan oo kuu tilmaamaan in akhbaaraha
iyo ogaysiisyada ku lifaaqan ay macluumaadyo xull ah oo khaasa yihiin.
Wargalin iyo ogeysiin wanaagsan
Ishaarooyin ogaysiis iyo tilmaamo xull ah oo khaas ah
Qarshka xisaabta immisa ayaa aadeega caymiska khasnada bukkanku la wareegayaa oo bixinayaa?
Adeega waxtarka iyo adeegyada waxqabadka oo caymiska
guud ee assaasiga ah oo khasnada bukkanku la wareegayso
oo ay bixinayso.
Cinwaano ahamiyad wayn leh
Wixii faahfaahina ama akhaabro dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa (masalan – xafiisyada xarumaha iyo maamulada adeegyada tala siinta qaabilsan oo u dhow dagaankaaga) cinwaanada qoraalkan ku xussan.
Sideen caafimaad taama
oo buuxa iyo sixo
wanaagsan ugu waari
Cafimaadka nafsadaada iyo sixadaada aad mulkiila ahaan u leedahay waa
raasamaal aad u qaaliya oo u qiimo badan. Si caafimaadkaaga iyo sixadaada aad u daryeesho una xafidato, waa muhiim in shaqsi ahaan xaaladaha
amuuraha jirkaagu ku suganyahay in aad fiiro gaara u yeelato ood wardiyeyso kana taxadarto adigoo darsaya una dhaba-galaya wixii nafsadaada u
roon oo macaash u leh, una foojigan xayaatadaada wixii anfacaya. Taas
macnaheedu waa adigoo darsa, xog-ogaalna u noqda wixii caafimaadka
nafsaddaada waxyeelo iyo khassaare u soo jiidi kara ama cuduro iyo xannuun kuu keeni kara.
Nafaqada iyo raashinka sixada
caafimaaka leh iyo xarakaadka
dhaqdhaqaaqa jimicsiga jirka
Cuntada sixada leh iyo nuxurka raashinka munaafacaadka noocyada kala
duwan leh oo la nafaqaysto iyo xubnaha waxaayaha jirka oo xarakaad
dhaqdhaqaaq la galiyo waa ta caafimaadka nolosha qofku cimri kasta iyo
da`a kasta uu ku jiro ugu muhiimsan. Si aad raashin sixa caafimaad leh
isuna dheeli tiran aad u nafaqeysato waa in aad fiiro iyo foojignaan gaara u
yeelato farsamada waxa aad karinayso ama aad cunayso.
• Cunn oo nafaqayso maalin kasta dheefta quddaarta cagaaran, miraha
iyo badarka / miraha qoloftu ku daboolantahay/ baradhada, dheefta iyo
nafaqooyinka caanaha laga sameeyo, noocyada kala duwan ee hilibka,
malayga, ukunta, dheefta loo yaqaan Tofu iyo cuntooyinka leh borotiinka.
• Yaree quudashada macmacaanka lagu faakihaysto ama kuwa madadaalis dhandhanaasi milixaysan loo calashado oo loo daangaysto.
• Cab oo qurquri maalintii qiyaasta ilaa laba littir oo biya ah waliba kuwa
aan sokorta lahayn ama aan sokor lagu macaanaysiin. Cadada in yar ayaa
caafimaad ahaan la ogolyahay qiyaasta in laga cabo Sharaabka casiirka
iyo cabitaanada kofaayiinta leh, ama cabitaanada alkolada iyo khamriga.
Dadka waawayn iyo waliba dhallaanka carruurta ah waa u muhiim, ka sokow nafaqaysiga raashinka sixada leh, in maalinkasta xubnaha waaxyaha
jirka jimicsi iyo xarakaad dhaqdhaqaaq loo howl galiyo.
Awooda sixada caafimaadka waxaa lagu hormarin karaa ama kor loogu
qaadi karaa ama xafidaadiisa lagu sugi karaa,iyadoo fursadaha camaliyaadka iyo howlaha shaqooyinka nolol maalmeedka laga faaiidaysto ; sida
cadaysiga isticmaalka ku socoshada luga baxsiga xakabadaha ama jaranjarooyinka, ama mushaaxa aaryo-hawo qaadashada luga –baxsiga socod
maalmeedka, oo si lixaad xowli awood ku jirto loo talaabsado ama baaskiilka wadidiisa oo lagu luga-baxsado. Libin iyo guul caafimaad oo waxtar
leh ayaad sixada noloshaada u soo kordhinaysaa hadii aad caadaysatid
xattaa nussa saacad in aad nafsadaada, maalin kasta dhaqdhaqaaq iyo
xarakaad jimicsi u qorshayso oo ku daryeeshid. Dhalaanka carruurta, ugu
yaraan waa in maalin kasta hal saac oo dhaqdhaqaaqa ama xarakaad isboortiya ay sameeyaan.Taasi waxay kor u qaadaysaa oo ka saacidaysaa
horumarka awooda koritaankooda dhanka jirka iyo maskaxdaba.
Wixii faahfaaina, qoraalo, iyo akhbaaro wacyigalina oo ku saabsan mowduucyada nafaqaysiga raashinka sixada caafimaadka leh iyo macluumaadka xarakada dhaqdhaqaaqa jirka, waxaad ka heli kartaa oo lagu soo bandhigay iyakoo luqado kala duwan ku daabacan khadka internedka
websaytka - Webseite www.miges-plus.ch. Ma doonaysaa mowduuca
raashinka iyo nafaqada sixada in aad warbixino iyo wacyigalin dheeraada
lagaa siiyo, masse damacsantahay in aad qaabka qorshaha iyo habka aad
caadaysatay oo aad wax u cunto in aad wax ka badasho, ama ma doonaysaa in aad miisaanka culayska iska dhinto, hadaba hadii aad sidaas damacsantahay, waa in aad la xiriirtaa xafiiska iyo xarunta bulshada maamulka
adeega tala- siinta cilmiyeysan iyo wacyigalinta barnaamijyada raashinka
iyo sixada nafaqada leh u qaabilsan oo u furan. Dhakhtaraddaada ama xarunta dhakhatarkaaga waxaa laga heli karaa oo laga codsan karaa cinwaanada xafiisyada adeega wacyigalinta raashinka qaabilsan oo ku yaala gobolkaaga.
•Adeega maamulka iyo hayadda wacyigalinta raashinka
ee swiiska – Akhbaaro, talo-siin wacyigalin ah, fikir ku biirinta
raashinka munaafacaadka leh, hindisayaasha farsamooyinka
qorshaysan oo wax loo kariyo www.sge-ssn.ch, [email protected]
•Urur qarameedka qaabilsan bulshada xannuunka sokorowga
qaba. Akhbaaro-wacyigalina iyo adeeg saacidaad taagyeero oo lagu
garabgalayo bukaanka xannuunka sokorowga qaba iyo eheladiisaba www.diabetesgesellschaft.ch, [email protected]
Tel. 056 200 17 90
•(Hay`adda iyo ururka maamulka wacyigalinta raashinka u
qaabilsan bulshada sokorowga qabta) – Adeega akhbaaraha iyo
maclumaadka xanuunka sokorowga iyo nafaqada u khaaska ah
www.diabetes-ernaehrung.ch, [email protected]
Tel. 031 302 42 33
•Xafiiska iyo xarunta u furan adeega maamulka tala-siinta
cilmiyeysan iyo wacyigalinta waalidka –aabayaasha iyo
hooyooyinka – Xarunta qabbilsan sua`aalaha la xiriira wacyi galinta
Urrurka maamulka talasiinta hooyooyinka SVM
www.muetterberatung.ch, [email protected]
Tel. 044 382 30 33
•Nolosha isu-miisaaman oo isu-dheelitiran ee Iswiiska –
Macluumaadka iyo akhbaaraha la xirriira raashinka sixada leh,
iyo dhaqdhaqaaqa jimicsiga jirka carruurta iyo dhalinyarada
www.suissebalance.ch, [email protected]
•BASPO Wazaaradda iyo maamulka qaranka ciyaaraha isboortiga
KIS Xarunta u xilsaaran qorshaynta qabanqaabada ciyaaraha
isbortiga, qaabilsana maamulka awooda cilmiyeysan ku salaysan
ee ururinta iyo mideynta bulshada
www.baspo.ch/kis, [email protected]
Sigaarka oo la iska ilaaliyo iyo
cabitaankiisa khamriga oo la yreeyo
Sunta sigaarka ku jirta, waxey dillaacisaa oo dhawac u gaysataa halbowlayaasha iyo hawo mareenada neefta, taasoo u sii gudubta sanbabada, aafooyin iyo waxyeelooyin khassare culusna u gaysata; islamarkaasna sahasha oo fudaydisa cudurada ku dhaca wadnaha iyo halbowlayaasha dhiig
wareegidda jirka qaabilsan ama abuurta oo dhalisa xannuunada iyo jirrooyinka kankarada. Qiiqa sigaarku wuxuu khassare waxyeelo caafimaad u
gaystaa sixada caafimaadka dadka aan sigaarka cabin, waliba khaas ahaan carruurta iyo dhallaanka sabiga ah. Si ilmaha aan wali dhalan ee uurka
hooyada lagu sido sunta sigaarka looga badbaadiyo, waa in xilliga dumarku uurka leeyihiin ama muddada ay carruurta naaska nuujinayaan ay
iska mamnuucaan oo iska xaarantimeeyaan isticmaalka iyo cabitaanka
sigaarka. Wixii macluumaad iyo akhbaaro faahfaahina oo ku taxluuqa iska
joojinta sigaarka waxaad ka heli kartaa xarunta khadka telefoonka loo
yaqaan (Rauchstopplinie) iyo cinwaanada la xiriira oo ku xussan (Tixraacid
Khamrigu benii-aadanka qof kasta qaab gooniya iyo noocyo kala duwan
ayuu u saameeyaa oo u dooriyaa, xattaa caddad qadar aad u yar, ayaa
awood saa`ida yeelan kara oo isbadal wayn keeni kara. Isticmaalka khamriga wuxuu mashaakil, iyo musiibo isu-badalaa markii nafsaddaada iyo
benii-aadanka bulshada ku dhow dhow oo aad xiriirka leedihiin uu khatar
halisa u soo jiidayo, oo daannooyin khassarena u gaysanayo. Mashaakilaadkaas iyo musiibooyinkaas khamriga waxaa ka mid ah masalan cabitaankiisa oo si xad-dhaafa oo saa`ida loo cabo, ama isku darka ka yimaada
cabista khamriga iyo daawo qaadashada oo la isku barxo, lana isku garab
wado, ama kaxaynta gaariga iyadoo khamri la cabsanyahay,ama isticmaalka khamriga iyo xilliyada howlaha shaqada la gudanayo. Dumarku
waa in ay iska joojiyaan oo iska mamnuucaan isticmaalka khamriga xilliga
xaamilanimada uurka ama muddada ay dhallaanka naaska nuujinayaan.Dadka waawayn oo sixada caafimaadkoodu taamka tahay wax mushkilada uma keenayso haday khamriga qiyaasta caddaddahan qarriran oo halkan hoose ku xussan isticmaalaan. Dumarka qiyaasta waa isticmaali karaan maalintii caddada qarriran oo hal galaas oo caadiya, raguna maalintii
qiyaasta cabirka waa in aysan laba galaas ka badasan. Cabirka galaasyada
caadiga ah waxaa loola jeedaa, kuwa mugooda miisaaman lagu beego
Macluumaad in la ogaado ay wanaagsantahay
Khamriga iyo caadaysiga qabatinka maandooriyaasha
•Waxay carqaladayn oo fragalin khassarena u gaystaan sixada caafimaadkaaga iyadoo isticmaalkoodu kuu soo jiidi karaan cuduro iyo shillal
khassarooyin xanbaarsan, dhaawacyo, ama ay kugu dhacaan xannuuno
iyo jirrooyinka waalida maskaxda iyo quluubta.
•Badanaa isticmaalka khamriga iyo mukhaadaraadka waxaa lagu
tilmaamaa in ay xirriir la leeyihiin dabiicadaha ku salaysan masalan
gardarada daandaansiga qayaxan, ama sida dilka ku xadgudubka
awood u xoogsheegashada xubnaha reerka iyo nolosha guriga qoyska
ama dagaalada iyo fidnooyinka ka dhax-qarxa kooxaha bulshada
•Muchaadaraadka iyo khamriga qofka isticmaala kuma ridaan oo uma
soo jiidaan oo kaliya culays ka tan-wayn noloshiisa ee uusan xamili karin,
ee mashaakilaadka silaca iyo rafaadku waxay ku sii fidaan oo ku faafaan
ehelada iyo qaraabada, sida (masalan fidno iyo saxarad joogto ah,
ama calaaqaad ku salaysan colaad iyo walbahaar iyo mashaakilaad
dhaqaale oo la xiriira, ama dhibaatooyin intaas ka sii badan)
Hadaba markay xaaladahaas oo kale kula soo darsaan, waxaa kuu eg oo
kuu bannaan in aad khubaraa goboleedka ku takhassusay aqoontana u leh
cilmiga aririmaha mukhaadaraadka iyo mashaakilaadka la xiriira, in aad
dalbato oo u qeyla dhaansato si ay mushkilooyinka kula soo darsay adiga
iyo eheladaadaba ay idiinka gargaaraan oo idin garab galaan. Khubara`ada
mukhaadaraadka talasiintooda cilmiyeysan waa bilaash oo lacag kuguma
fadhido, iyo iyaka oo hoos imanaya ayna waajib ku tahay ilaalinta sharciyada iyo xeerarka ka dagsan asturaada iyo xaqdhowrka aamin-galinta
xafidaada sirta.(ka tixraac bogga 61). Wixii akhbaaro wacyigalina ama
macluumaad faahfaahina oo ku taxluuqa arintaas waxaad ka heli kartaa oo
kala xiriiri kartaa maamulka tachtarkaaga ama tachtaraddaada.
khamriga, loogana adeegto baararka khaamriga – caddadaha qarriran (3 dl
oo biir ah 1 dl oo wayn ah, 2 cl oo khamriga kuluul ah).
Wixii macluumaada iyo akhbaaro faahfaahina oo ku saabsan faakihaysiga
iyo khataraha ku sugan isticmaalka khamriga waxaad ka akhrisan kartaa
iyadoo luqadaadii hooyo ku qoran qoraalka kitaabkan yar, iyo khadka internedka www.migesplus.ch.
•Akhbaaraha iyo macluumaadka
mukhaadaraadka – Wacyigalin, talasiin
cilmiyeysan iyo garrgaarka cinwaanada
www.sucht-info.ch, [email protected]
Tel. 021 321 29 11
•Ururka iyo iskaashatada shaqaalaha u howlgala
ciribtirka iyo la dagaalanka tubaakada (AT Schweiz)
www.at-schweiz.ch, [email protected]
Tel. 031 599 10 20
•Ururka cudurka kankarada iyo haya`ada loo yaqaan
www.krebsliga.ch, [email protected]
•Rauchstopplinie (Joojinta sigaarka ee khadka
talefoonka) – Maamulka talasiinta cilmiyeysan, kuna
saabsan joojinta sigaarka ee khadka telfoonka iyadoo
dhanka isfahamka badanaa la adeegsan karo luqado
www.krebsliga.ch > Rauchstopplinie
Tel. 0848 000 181
•Ururka iswiiska u qaabilsan daryeelka sanbabada
www.lung.ch, [email protected], Tel. 031 378 20 50
•Ururka iswiiska u qaabilsan wacyigalinta
is-kuxirida iyo maamulka talsiinta-cilmiyeysan
www.infodrog.ch, [email protected] Tel. 031 376 04 01
•www.infoset.ch – Macluumaadka iyo akhbaaraha ku
Daryeelka caafimaadka tallaalada waxey horistaagaan oo diffaac u yihiin
cuduro kala duwan oo la is-qabadsiiyo ama la isku daaran karo.Iswiiska
waxaa howsha qorshaha tallaalada fulintooda u xilsaaran tachtaradda
ama takhtarka carruurta ama takhaatiirta ka howgala xaafadaha.
Wasaaradda daryeelka caafimaadka qaranka waxay wacyigalinteeda iyo
baraarujinteeda bulshada ku dhiiri galinaysaa in la iska tallaalo cudurada:
qallalka seedaha iyo curuuqyada dareenka, cudurka qufaca jix-dheerta,
cudurka dabaysaha curyaamisa ilmaha, cudur hurgun boogeedka iyo kasoobaxa maskaxda, cudurka ka soo-baxa hunguriga iyo jidiinka dhuunta,
cudurka fasfaska sumeeya dhiiga, cudurka jadeecada, cudurka quman
xannuunka, cudurka cagaarshowga B, iyo waliba cudurka caabuqa hurguma ee la is-qaadsiiyo, oo badanaa ku dhaca gabdhaha loona yaqaan (Papillomaviren) (HPV). Waxaa intaas kuu sii dheer tallaalo kale oo lagam maarmaan noqon kara sida masalan tallaalada loo qaato socdaalka iyo markii
wadanada dibadda loo safrayo.
Wixii wacyigalina ama su`aala ah oo aad ka qabto qorshaha tallaalada
waxaad kala xiriiri kartaa ama ka wareysan kartaa takhtaraddaada ama
takhtarkaaga. Wixii faahfaahina ama akhbaaro intaas ka sii qodo dheer oo
tallaalada ku saabsan waxaad ka heli kartaa kalana socon kartaa internedka.
•Macluumaad iyo akhbaaro ku saabsan
tallaalka,kuna daabacan luqado kala duwan
www.migesplus.ch, Rubrik Publicationen >
Kind & Gesundheit > Impfplan
•Wassaaradda daryeelka caafimaadka qaranka
www.sichimpfen.ch, [email protected]
Tel. 031 323 87 06 oder 0844 448 448
•www.infovac.ch – Saldhiga iyo xarrunta maaulka
ISKA-DIFAACA IYO LA DGAALANKA CUDURKA
FALALKA GALMADA LA IS-QAADSIIYO OO LA
ISKU-DAARTO, LOONA YAQAAN (HIV/AIDS)
Ka sokow cudurka Aidis-ka waxaa jira cuduro badan oo falalka galmada la
isku daarto oo la is-qabadsiiyo, waliba kuwa lagu magacaabo STI - „Cudurada falalka galmada la isugu-gudbiyo“ (sida cudurka chlamydien, jabtada
iyo cudurka cagaarshowga) Intooda badan cuduradaas waa la daawweyn
karaa oo waa laga bogsoon karaa, laakiin waxaa shardiya mar hore in jiritaankooda la ogaado iyo inta aysan dillaacin oo faafin. Qaarkood waa la daawayn karaa laakiin suurtagal ma aha si rasmiya oo buuxda in looga bugsoodo, sida (masalan, Aidisk-a iyo cagaarshowga -HIV, Herps)
Cudurkan Aidis-ka ama cudurada loo yaqaan STI, oo fallalka galmada laga
qaado, waxaad bulshada iyo nafsaddaada uga ilaalin kartaa oo uga difaaci
kartaa adigoo falka xiriirka galmada bac ama cinjirka bambiirada loo yaqaan (kondom) isticmaala oo iska ilaaliya, iskana dhowra in aysan shahwo
ama dhiig uusan afkaaga ku dhicin. Qalabka bacaha ama cinjirka bambiirooyinka fallalka galmada loo isticmaalo sida (kondoomka) waxaa lagu
gadaa suuqyada dukaanada waawayn, ama dukaanada loo yaqaan daroogariyada, bacda cinjirka nooca loo yaqaan (Femidome) waxaa laga helaa farmashiyaasha. Haddaad ka cabsi qabto in aad cudurka HIV ama cudurada kale oo la isku daarto in aad qaaday oo uu kugu tallaalmay, waa in
aad kala tashato takhtaraddaada ama takhtarkaaga, ama aad iska xaadiriso isbitaalka loo yaqaan (poliklinik)(Isbitaalka bukaan socodka) ama xarrunta maamulka cayminta iyo garrgaarka Aidis-ka ee Iswiiska, ama saldhigyada maamulka qorshaynta qoyska qaabilsan.
•Hay`adda cayminta iyo maamulka gargaarka
Aidis-ka ee Iswiiska (AHS)
www.aids.ch, [email protected]
•PLANeS – Ururka Iswiiska qaabilsan maamulka
tarbiyadda falalka galmada iyo daryeelka taranka
bulshada isbahaysiga urrurada sare ee qaabilsan
maamulka wacyigalinta iyo qorshaynta qoyska, uurka
iyo xaamilanimada, iyo arimaha tarbiyadda fallalka
galmada. www.plan-s.ch, [email protected]
Tel. 031 311 44 08 oder 021 661 22 33
•Xarunta qaabilsan wacyigalinta iyo saldhiga
maamulka talsiinta-cilmiyeysan oo ku saabsan
tarbiyadda galmada iyo daryeelka caafimaadka
taranka bulshada (SRG)
www.isis-info.ch, [email protected]
QADDIMAAD LA SII HORMARSANAYO
BAARITAANADA DARYEELKA CAAFIMAADKA
Si cudurada inta aysan dillaacin iyo bilowgooda mar hore loo ogaado waa
muhiim lagama maarmaana in si joogta ah baaritaano caafimaad oo hormaris ah loo sii qadinto. Inta cudurka yaraantiisa iyo bilowgiisaba la ogaado ayaa fursadda daryeelka daaweyntiisuna ka sii ballaarantahay oo ka
Marwo iyo dumara ahaan …
Rag iyo nin ahaan …
«Si joogto ah ayaan
baaritaanada fara-kuhaynta is-daba jooga ah u
booqdaa dhackhtaradayda. Adeegsiga baaritaano
caafimaad iyo farsamooyin cilmiyeysan oo
cudurada lagu faaqido
ayey waxay takhtaradda
u suurtagalinayaan mar
hore iyo curashadooda
cudurada in ay ogaato
sida cudurka kaankarada
ama kuwa hurguma oo la
ayaan kala xaajoodaa oo
kala shiraa hadii aan
baaritaano caafimaad oo
hormarisa, lana sii
qadminayo ay caafimaadkayga ilaalintiisa
dan ugu jirto ama macno
wayn ii samaynayso.»
DARYEELKA CAAFIMAADKA QULUUBTA
Riyaaqidda iyo ku faraxsannaanta nolosha iyo mabsuudnimada waxay ku
timaadaa isku-dheeli tirka la isku miisaamayo culayska iyo rafaadka walbahaarka howlaha nolol maalmeedka iyo xilliga faakihaysiga nasashada
laga nafisayo, lagana soo kabsanayo silicii culayska xayaatad iyo qaxarka
nolol maalmeedka. Khalkhalka xannuunada qalbiga daannooyinka u gaysta iyo cudurada maskaxda waxay ka dillaacaan xaaladaha nolosha ku salaysan rafaadka iyo silica, ama dhacdooyinka culus ee tiiraanyada qofka
murugta ku reeba, ama xaaladaha noloshu imtixaan culus oon laga bixi
karin isu badalayso. Badanaa carqaladaha khalkhalka qluubta oo xassiloonaanta maskaxdana tashwiishka ku fura waxay ka soo askumaan oo ka
dhashaan markay qofka nolol saxariir dagaal culus la soo daristo ayna soo
food saarto bara-kac, qaxid, jirr-dill, ama awood muruq loogu xoogsheegto
oo lagu maquuniyo. Cabitaanka khamriga xad-dhaafka ah, ama caadaysiga qabatinka mukhaadaraadka, intuba waxay lug ku yeelaan karaan oo uu
xiriir ka dhaxayn karaa, mashaakilaadka ka soo askuma xannuunada quluubta carqaladaysan iyo aafooyinka musiibada bulshada la soo darista.
Dadka quluubta iyo maskaxda ka xannuunsan waa ku adagtahay in ay
gartaan mashaakilaadka qalbiga iyo maskaxda uga furan. Saas oy tahay
cudurka niyad jabka iyo xannuunka niyad qushuucsanaanta iyo madluunsanaanta joogtada ah oo loo yaqaan „ Depression“ wuxuu ku dhici karaa
qof kasta . Guud ahaana waa cudurka bulshadu badanaa u badantahay, oo
qiyaas ahaana dadwaynaha, qof kasta oo labaad marbuu xannuunkaasi
soo maray oo u soo silcayna una soo saxariiray. Xannuunada maskaxda
iyo cudurada quluubta ku dhaca ma aha macnahooda in qofku noloshii ka
turaanturyooday ama ka dhacay oo ka saaqiday oo cirib xumo la kulmay ee
waxaa lagu misaali karaa oo lala barbar-dhigi karaa sida xannuunada sokorowga, ama dhiig karka, waana in aan cudaradaas miisaankooda la fududaysan, laakiin la ogaado in casriga maanta aan ku jirono, baxannaanintooda iyo daawayntooduba ay suurtagal tahay. Hadii aadan is-hubin ama
afkaar iyo macluumaad badan aadan xannuunadaas ka haysan, la xiriir oo
kala xaajood xaaladaada caafimaadkaaga takhtaradda ama takhtar xaafadeedka, ama qof kale oo aqoon cilmi iyo khibrad u leh oo aad aaminsantahay, kalsoonina aad ku qabto. Ehelada iyo bukaanka cudurada quluubta
iyo maskaxda laga galay oo u xannuunsan, waxaa u furan oo ay la xiriiri
karaan, xarumaha iyo saldhigyada maamulka daryeelka caafimaadka
quluubta iyo maanka qaabilsan, si ay gargaar iyo caawinaad uga helaan.
Waxaa kaleetoo gargaar iyo daryeel caafimaad ee quluubta carqaladaysan laga helaa karaa jamaaca diineedka u qaabilsan bulshada maamulka
diinta, waliba qofkku markay xaaladaha culus iyo mashaakilaad nololeed
oo halista khattarata ah la soo darsaan. Waxaa kaleetoo adeegyo gacan
qabasho laga helaa maamulada samafalka arimaha bulshada ee degmada. Iswiiska waxaa ka jira oo ka furan daryeel caafimaad oo baaxad ballaaran leh looguna talagalay daaweynta xannuunada ku dhaca quluubta
iyo maskaxda. Wixii macluumaada oo intaas sii dheer waxaad ka heleysaa
isla qoraalkan qaybtiisa lagu sharaxayo daaweynta cudurada waalida iyo
daryeelka cilmiga farsamada cudur-shaafisada, oo ku qoran booga 36.
•Akhbaaraha wacyigalinta oo ku sharraxan luqado kala
duwan kuna saabsan daryeelka caafimaadka quluubta,
maanka iyo miyirka maskaxda:
www.migesplus.ch, Rubrik Publikationen > Psyche & Krise
•Pro mente sana – Akhbaaro wacyigalina, talooyin-cilmiyeysan oo
loogu gargaarayo bukaanka iyo eheladiisa.
www.promentesana.ch, Tel. 044 563 86 00
•Maamulka gacanta gargaarka fidisa 143 – Maamulka talasiintacimiyeysan ee khadka telefoonka qarsoon (dahsoon) sirtuna ay ku
asturantahay oo ku xafidsantahay
www.143.ch, [email protected], Tel. 143 ama 031 301 91 91
Cinwaanada maamul goboleedyada iyo ururada iskooda
mashaakilaadka isaga kaashada, loona yaqaano (Kooxaha isku-bahaysta
Maamul qarameedka Iswiiska ee qaabilsan isku xirida iyo hormarinta ururada iskooda mashaakilaadka isaga kaashada looa yaqaan
(kooxaha isku-bahaystay iskaa-isu garrgaarka): KOSCH,
www.kosch.ch/kontaktstellen.html, [email protected]
Tel. 0848 810 814 ama 061 333 86 01
Maamulka qaabilsan carruurta iyo dhalinyarada:
Beratung 147 Pro Juventute Talasiinta cilmiyeysan 147 ee
dhalinyarada – Maamulka gargaarka bilaashka ah, oon lacag kuugu
fadhiyin ee talasiinta qarsoon (dahsoon) oo khadka talefoonka iyo
wacyigalinta wada-sheekaysiga qarsoon ee khadka elektroonikadalagu
fuliya looguna talagalay dhalinyarada iyo carrurta.
www.147.ch, Tel. 147
HABKEE IYO FARSAMADEE
AYUU MAAMULKA CAYMISKA
BUKKAANKU U SHAQEEYAA?
Caymiska assaasiga ah ee guud
Dadweynaha iyo shaqsi kasta oo iswiiska dagan waa shardi in uu caymis
qaabilsan leeyahay oo uu uga gaashaamanayo jirrooyinka iyo shilallka. Caymiska assaasiga ah waa ku sandulle waajiba in uu qof kasta ka diiwaangashanyahay kana tirsanyahay iyadoon loo eegayn cimriga qofku uu ku
jiro, jinsiyadda uu u dhashay ama sharciga warqadaha uu leeyahay. Muddada is-diiwaangalinta waa ilaa saddex bilood in u dhaxeeysa gudaheed,
laga bilaabo dhalashada cunuga uu ifka yimaado, ama xilliga uu qofku dagaan aahaan iswiiska u soo gruuro. Caymisyada Iswiiska qaabilsan xannuunka cudurada ayaa waxay tiradoodu kor u dhaaftay cadada 80 shirkadood, waxaana lagu magacaabaa caymisyada khasnadaha bukkaanka.
Shirkadaha khasnadaha bukkaanku waxay khasnad kasta ku soo bandhigaysaa kaana beecinaysaa oo kuu fidinaysaa caymiska assaasiga ah oo
adeeg ahaan ay kulligood isaga wada mid yihiin. Adeega caymiska assasiga ah wuxuu ku salaysanyahay sharciga caymisyada caafimaadka ka
dagsan. Caymisyada khasnadaha bukkaanku waa ku shardi sharciyeysan
oo qassaba in ay qof kasta u ogolaadaan iska diiwaangalinta iyo ka tirsanaanta adeega caymiska assaasiga ah, oo qofka qaataan oona ogolaadaan.
(kvg). Qof kasta xaq buu u leeyahay khasnada uu doonayo in uu si xora u
xusho oo iska diiwaangaliyo.Tafaasiir falanqeysan waxey ku qorantahay
cinwaankaan hoos ku xussan.
www.praemien.admin.ch > liiska cinwaanada shirkadaha caymisyada
ilamaa xadkee buu gaarsiisanyahay waxtarka iyo
adeega abaalmarinta caymiska?
Waxtarka iyo adeegyada u muhiimsan:
Adeega daryeelka bukkan socodka waa daryeel ay fulinayaan
tachaatiirta rasmiga ah ee dowladu ogtahay, lana
ictiraafsanyahay oo xerrarkeeda iyo qaynuunkeedana ku
shaqeeya oo ku howlgala.
Daryeelka bukkaan jiifka Waa adeega daryeelka lagu suganyahay isbitaalka iyo ku
hakashada joogitaanka qeybta guud (iyo qolka sariiraha badan)
ee isbitaal goboleedka, islmarkaasna ka tirsan isbitaalada liisika
dowlada ku jira oo ay ictiraafsanatahay.
• Daryeelka gurmadka badbaadada
• Qarashka bukkan qaadaha iyo qiimaha sicirka badbaadada
Daawada Adeega qoral daawo iyo shaybaar dhakhtareed oo waajibinaya in
khasnada bukkaanka la soo maro (Spezialitätenliste, Analysenliste)
Xaamilada iyo umusha
Addeegyada baaritaanada fara-ku-haynta is-dabajooga joogtada
ah ee xaamilada, adeega qarashka ay dhalmadu ku kacayso,
adeega tababarka u diyaargarowga foosha, adeega aqoonta
talasiinta cilmiyeysan ee naasnuujinta iyo adeega farsamada iska
soo xaaqidda iyo iska soo rididda uurka xaamilanimada.
• Dumar dhakhtarinta iyo farakuhaynta baaritaanadooda.
• Baaritaanada caafimaadka carruurta inta aanay iskuulka
Dib u dajinta
Dib u dajinta bukkaan jiifka soo maray marxalada qalitaan, ama
intii muddo ah sakaaraadka ahaa, ama daryeelka farsamada
cilmiga cudur shaafisada loona yaqaan (Physiotherapie), iyo
daryeelka farsamada cilmiga cudur-shaafisad qaabilsan dib uga
shaqaysiinta xubnaha iyo kala goysyada jirk loona yaqaan
(Ergotherapie)oo waliba ay shardi tahay intuba in qoraal
takhtareed iyo ruqsadiisa lagu fulinayo.
Dhacdooyinka jirada iyo
xannuunka marka dalka
dibadiisa lagu suganyahay
Adeega dhacdada daryeelka badbaado gurmad, xilliga waqti
qarriran oo dallal shisheeye iyo dibadda khaarjka lagu
suganyahay. (Masalan fassaxa)
Laga bilaabo 2012: Farsamada
iyo daryeelka caafimaadka ee
noocyada daawo dabiiciga
Noocyada daryeelka iyo sancooyinka daaweynta loo yaqaan
loo yaqaan afka qalaad, Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Neuraltherapie, iyo walibba daryeelka loo yaqaan
phytotherapie ama dawwao dhaqameedka shiinayska.
Macluumaad faahfaahin tafatiran oo ku saabsan adeegyada,caymiska, waxaad ka heli
kartaa barnaamijyada qoraalka ah, iyo macluumaadka wacyigalinta oo ay shirkaduhu waxtarka
caymiska bukkaanka uga warbixinayaan kuna sharaxayaan.
Ma bilaash-baa daryeelka caafimaadka iswiisku?
Jawaabtu waa maya, waa in aad bil-kasta khidmad abaalmarina aad caymiska u shubto, oo walibana ka qeybqaadato bixinta qarashka daryeelka
la kulanka takhaatiirta, hadii aad adeega daryeelka baxannaanadooda iyo
haqabtirkeeda aad u baahatid.
Khidmada abaalmarinta caymiska caafimaadka
Waxaad sharciga ku qasbantahay is-cayminta caafimaadkaaga, in aad
khasnada bukkaanka khidmadeeda abaalmarinta aad bil kasta iska shubto. Ilmaha ilaa da`da 18 jira waa u raqiis oo qarashkoodu wuu yaryahay.
Khasnadaha qaarkood waxey xayeysiis u sameeyaan in dalinyarada barbaarta ah ee da`adoodu.(19, ilaa 25 sano jirr) u dhaxayso in sicirka qiimaha
loo jabinayo.Khasnadaha bukkaanku waxay ku kala duwanyihiin kala sareynta sicirka qiimahooda suuqa, laakiin giddi dhinaca munaafacaadka
wax soo saarkooda iyo waxtarka adeegyada howlaha caymiska assaassiga ah oo ay bulshada ka tirsan u fuliyaan una qabtaan waa isaga mid.
Wassarada caafimaadka qaranka, waxay sannadkasta dadwaynaha u soo
bandhigtaa daraasaad iyo warbixin buuxda oo ku saabsan liiska qiimaha
khidmadaha shirkadaha caymiska oo khasnadaha bukkaanka gobolada.
(www.praemien.admin.ch). Waa faa`iido macaash iyo guul kugu soo korrortay oo kuu soo hoyatay, hadii aad isu qiimaysid isuna-miisaantid sicirka
khasnadaha caymisyada kala duwan oo aad is-barbardhigtid.
Ka qaybqaadashada iyo bixinta qarashka loo yaqaan (Franchise,
qorsha qarashka isku-ilaalinta, iyo qarashka isbitaalka)
Ka qaybqaadashada qarashka daryeelka caafimaadka iyo bixinta qarashka
sannadkii uu bixinayo qofka caymiska bukkanaka ka tirsan waa lacag ugu
yaraan gaaraysa ilaa saddex boqol oo franki (300 Franken), taasoo ka kooban qarashka Isbitaalka, qarashka adeega daryeelka dhakhtarka,iyo qarashka ku baxa daawooyinka. Bixinta qarashkaaas iyo khidmadaas caymiska waxaa lagu magacaabaa oo loo yaqaanaa (Franchise). Carrurutu
waajib kuma aha in ay qarshkaan bixiyaan.
Biilalka sanadkii dhakhtarku kuu soo diro jammac ahaantooda markii la
isku daro hadii ay ka sara maraan caddadii iyo qarashka loo yaqaan Franchise-ka ay adiga waajibka kugu ahayd in aad bixiso, ayaa caymiska khasnadda bukkaanka wuxuu isku xil-saarayaa in uu qarashka dheeraadka ah,
ama wixii qarasha oo kuu sii kordha in uu la wareego oo uu bixiyo. Laakiin
saas oy tahay waxaa wali kugu waajiba toban bersenti (10%) oo caddada
xisaabta qarashka caymisku la wareegay in aad wax ka bixiso oo aad ka
qaybqaadato. Qarashkaan danbe oo tabanka bersentiya(10%) waxaa lagu
magacaabaa, qarashka isku ilaalinta, caddadiisuna kama sara mari karto
ugu badnaan ilaa todoba boqol oo franki sanadkii (700.- Franken) sannadkii, Carrurtuna qarashkooda qaabilsan isku-ilaalinta ma dhaafi karo
ugu badnaan ilaa sadex boqol iyo konton franki (350.- Franken). Waxaa
kaleetoo intaas kuu sii raacsan oo kugu waajibaysa qarashka isbitaalka in
aad wax ka bixiso oo caddaddiisu gaarayso 15 Franki calaa maalintii daryeelka caafimaadka isbitaalka iyo ku sugnaanshihiisa.
Darajada hooyanimada (xaamilanimada iyo umusha) ma aha shardi in aad
qarash bixinta adeegyada daryeelka caafimaadka in aad ka qeyb-gasho,
macnaha kuguma waajibayso in aad bixiso,qarashka Franchise-ka, ama
qarashka isku-ilaalinta, iyo qarashka daryeelka caafimaadka isbitaalka.
Sideen u kaydsan karaa lacagta khidmada ee
Shirkadaha caamisyada khasnadaha bukkaanku, waxey dadwaynaha u
soo bandhigaan oo u fidiyaan qorshayaal iyo modello, macnaha mashruucyo ay lacagtu kuugu baaqanayso, qarashkuna kaa yaraanayo oo ku salaysan qaab lacagtu kuu dhigmayso iyo habab farsamooyin kaydsi oo qarashka kaa baxaya uusan badnayn, islamarkaasna aad si madax bannaan oo
xora aad u xulan kartid.
• Qorshaha iyo moodelka takhtar xaafadeedka oo qarashkii
daryeelka takhaatiireed kaa yaraanyo iyo moodelka kale oo soo
raaca oo loo yaqaano HMO («Health Maintenance Organization»)
Hadii aad dooratid labadan hindise ama moodeel oo qasdigu yahay in
qarashka baxaya daryeelkaaga uu yaraado, waxaad isku waajibinaysaa
hadii aad xannuunsatid in aad ku hormartid takhtaradda ama takhtarka
xaafadda sharciyeysan oo la ictiraafsanyahay, ama waxaad isku waajibinaysaa in aad iska xaadiriso xarrunta maamulka daryeelka caafimaadka
oo loo yaqaan HMO. Halkaas haday lagama maarmaan noqoto waxaa
laguu sii gudbin doonaa takhaatiirta takhasusska leh (Tixraacid Bogga
30). Moodeelooyinkaan aad xulatay heshiiskooda ayaa qoraya in aadan
xaq u lahayn aysanna kuu bannaanayn in aad ikhtiyaarkaa ama iskaa u
xulatid ood u tagtid takhtaradda ama takhtarka takhassuska leh, adigoon laguu soo gudbin. Awooda ruqsada laguu gudbinyo takhaatiirta
takhasuuska leh waxaa u xilsaaran takhtaraddaada ama takhtarkaaga
qoyska. Laakiin takhtaraddada ama takhtarka dumarka, ama takhaatiirta caruurta ama takhaatiirta indhaha intuba waad u madaxbannantahay
oo si xora adoon cidna u soo marin ayaad u xulan kartaa uguna tagi
kartaa. Qorshaha iyo hindisaha u dagsan nooca moodelooyinkan caymiska hadii aad go`aansato, waxaad iska bixinaysaa qadar yar oo lacagta
• Moodeelka caymiska oo loo yaqaan (Telmed)
Nooca qorshaha iyo hindisaha moodeelka caymiska loo yaqaan TelmedModel hadii aad dooratid waa in aad hadey mashaakilaad caafimaad
xumo kula soo darsaan aad horta khadka telefoonka ee xarrunta maamulka talasiinta cilmiyeysan qaabilsan aad kula xiriirto. Halkaas waxaa
talooyin cilmi ku dhisan iyo macluumaad wacyigalina ku siinaya qof cilmiga daryeelka caafimaadka khabiir ku ah, isagoo kuu tilmaamaya habka iyo farsamada aad mashaakilaadka caafimaad darada ku haysta aad
uga bixi karto oonad ku xallin karto. Haday waliba lagama maarmaan
noqotana iyadoo laguu gudbinayo takhaatiirta, ama khubaraa`ada daryeelada farsamooyinka cilmiga cudur shaafisada iyo howlaha terabiyooyinka qaabilsan oo kuu shaqeeya. La talinta cilmeysan oo khadka
telefoonka wuxuu raqiisinayaa oo hoos u dhigayaa qarashka, halkaasna
waxaa kaa yaraanaya oo kaa naaqussaya oo dhinmaya qarashkii khidmadda caymiska aad ku bixin lahayd.
• Korr sare u qaadida qarash khidmadeedka sannadka
Shirkadaha caymisyada khasnada bukkaanku, waxey suuq beec galin
iyo xayeysiin u sameeyaan, qarash khidmeedka sicirka sare ee sannadka oo loo yaqaan Franchise.- Hadii aad xulato in aad bixiso qiimo kore oo
ka sareeya 300.-Franken, ee qarash khidmadeedka sannadka qarriran,
waxaad si lixaad leh uga qey-bqaadatey, maalkaagana u hurtay shirkada
caymiska khasnadda bukkanka Iyo lacalla taxaddar ahaan hadii xannuun
mustaqbalka kugu dhaco. Taasi waxay kuu soo hoyinaysaa guusha in
aad khidmad yar la baxdo qarashka iyo xisaabta uu ku kacayo xilliyada
aad xannuunsantahay, madaama aad qarash sannadeedka caadiga
ahna in ka sarreysa aad bixisay. Bulshada inta qaan-gaartay oo waa
wayn, waxay qarash sannadeedka loo yaqaan- Franchise-bixinteeda
kala dooran karaan caddadaha, 300, 500, 1000, 1500, iyo ilaa 2500.Franken. Qorsha nooca caymiska moodeelkan oo ku dhisan in lacag kuu
baaqato, ayaa waxaad ka faai`idaysan kartaa, khidmad sannadeedka
carruurta loona yaqaan – Franchise-, si mustaqbalka qarashka carruurta
raqiis kuugu noqdo . Khidmad sannadeedka carrurta oo loo yaqaan –
Franchise-ka, waxaad ka xulan kartaa caddadaha qarriran oo laga bilaabayo, 100, 200, 300, 400, 500, ilaa 600.- Franken.
Tijaabi in aad si toosa shirkada caymiska khasnadaada bukkaanka in aad
ula xiriirtid si aad uga heshid akhbaaro iyo macluumaad wacyigalina oo ku
saabsan noocyada qorshayaasha caymisyada caafimaadka iyo jadwalada
moodeelooyinkooda kala duwan.
Waliba waxaa kuu sii dheer fursadda in aad xor iyo ikhtiyaar u leedahay, in
aad shirkadda caymiskaaga aad ka badalato adigoo qasdigaagu yahay in
ilaa xad lacagta khidmadu kuu baaqato oo kuu dhigmato.
Is-barbardhgidda qiimaynta isu-miisaamidda shirkadaha khasnadaha bukkaanka iyo badalaadooda loo wareegayo khasnad kale
Farqiga sicirka iyo adeegyada shirkadaha caymyada khsanadaha bukkaanka kala duwan u dhexeeya iyo is-barbardhigidda isu-miisaamintooda
waxaad la kaashan kartaa kana ogaan kartaa liiskooda taxan oo ay
akhba`araha, ogeysiisyada iyo macluumaadka warbixintooda ku soo
bandhigaan (www.praemien.admin.ch). Waxaa kuu bannan oo aad fursad
u leedahay, caymiska caafimaadka assaasiga ee khasnada bukkaanka aad
ka tirsantahay in aad muddo saddex bilood gudaheeda sida sharciga
waafaqsan kuna beegan sannadka aakhirka bisha juunyo ama aakhirka
bisha desembare in aad heshiiskii aad la gashay sharci ahaan aad ka baxdo, qaynuunka adigoo u cuskanayana oo aad ka ruqusaysatid adigoo u
badalanaya shirkad kale oo ka raqiisan. Hadii caymiska aad ka tirsantahay
uu ahaa nooca modelka u dhisan qaabka loogu tala galay kaydsiga iyo
dhigaalka in ay lacag khidmadeed kuu baaqato, ama khidmad sannadeedka loo yaqaan –Franchise-oo aad bixisaanaa uu yahay mid ka sarreeya sadex boqol oo franki (300.- Franken), ayey aakhirka bisha desembar oo kaliya sharciyan kuu bannantahay in shirkada caymiska khasnadaada aad
isag bixi karto oo aad ka ruqsaysan karto.
aa muhiim : Ka bixidda iyo ka ruqsaysashada caymiska si tu sharciga u
waafaqsan oo meelmara u noqoto in aad ugu danbayn taariichaha 31.
Maarso ama 30. Sebtembare aad kulan la yeelato iskana xaadiriso xarunta maamulka shirkada caymiska caafimaadka aad ka tirsantahay. Si heshiiska ka bixida iyo ka ruqsaysashada khasnada bukkaanku sharci-gal u
noqdo, waa in shirkada caymiska toos loogu gudbiyo warqada ruqsada ka
shaqsi ahaan iyadoo la adeegsanayo habka boostada iyo farsamada diinwaagalinta boostada loo yaqaan –rekomandaato.
adii shirkada khasnada bukkaanka aad ka tirsantahay ay sicirka kordhiso
oo qiimaha wax ku darto, marxaladaas waxaad xaq u leedahay ugu dan23
Macluumaad in la ogaado ay
Khidmad raqiisinta gobolka iyo sicir jabinta caymiska
Bulshada caymiska khasnadda bukkanka ka tirsan, laakiin
dhaqaalahoodu liito, waxey xaq u leeyihiin in sicirka
khidmada loo raqiisiyo.
•Maamulka gobolka ayaa u xilsaaran in ay go`aamiyaan,
wixii xaq u leh khidmad raqiisinta iyo caddada ilaa
heerka inta laga dhimayo oo laga raqiisinayo, iyadoo
qorshaynteeda xissaabeed la tixgalinayo dakhliga qofka
•Waxaa jira maamul goboleedyo si toosa oo ottomaatika
ah iskooda isu howlgaliya oo kula soo xirriiraya kuna soo
wargalinaya, hadii aad khidmad raqiisinta aad xaq u
leedahay. Ogow oo la soco in aysan arrintan gobolada
oo idil aysan isaga mid ahayn. Dan iyo faa`iido ayey kuu
tahay in aad maamulka gobolkaaga kala xiriirtid,
macluumaadka khidmad raqiisinta
Wixii akhbaaro iyo macluumaad wacyigalina waxaad ka
heli kartaa, ood kalana xiriiri kartaa maamulka xafiisyo
goboleedyada, laantooda qaabilsan maamulka khidmad
raqiisinta (Tixraacid Bogga 25).
bayn ilaa 31. Bisha maajo ama 30. Novembaro in ay shirkadu hesho qoraalka ruqsaysashada aad uga baxayso heshiiskii aad wada saxiixateen.
Caymiska siyaadada ah oo si xora oo madax bannaan aad
u xulan kartid
Waxaad heli kartaa in aad caymiska assaasiga ah ee guud,in aad mid hor
leh oo siyaado ah aad ku darsato, loona yaqaan caymiska dheeraadka ah,
adigoo heshiis la saxiixanaya shirkada khasnada bukkaanka. Laakiin
qorshahaas adeega dheeraadka ah waa lacag hor leh iyo qarash socda oo
kugu soo biiray.
Waxaa kuu bannaan kuuna suurtagala in aad shirkadda khasnada bukkaanka, heshiis la gasho ku salaysan, caymisyada dheeraaka ah oo siyaadada ah, kuwaas oo adeegooda daboolayo oo qaabilsana masalan, sida
dib isug habaynta iyo daryeelka rakkibaadda –toos-toosinta dib u sixidda
ilkaha carruurta, ama adeega daryeelka indhaha ookiyaalayaasha u baahan, ama daryeelka muraayadaha aragtida oo hab farsamaysan xuubka
indhaha lagu lifaaqo loona yaqaan (kontaktlinsen), ama daryeelka isbitaalka bukkaan jiifka qeybihiisa aysan oolin sariiraha badan oo loo kala yaqaano nuss brivaatiga ama qolka brivaatiga nafarka qura u gaarka ah, ama
daryeelka adeega uu bukkaanku u madax-bannaanyahay xulashada takhaatiirta isbitaalka. Inta aad adeegyada iyo daryeelka caymisyada aad
maal-galin badan ku sameyso, waa inta ay badanayaan biilalka xisaabta
khidmooyinka aad bixinayso, qarashkuna qaali kugu noqonayo.
Shirkadaha caymisyada khasnadaha bukkaanka oo idil waa isku xeer waana isaga mid nadaamka daryeelka adeega caymiska assaassiga ah, laakiin
dhanka daryeelka iyo adeegyada caymiska siyaadada ah waa bil-cagsi oo
way ku kala duwan yihiin oo iskuma waafaqsana oo isku mid ma aha. Qassab ma aha, mana jiro sharci kugu waajibinaya in labada caymis oo kala ah
nooca caymiska assaasiga iyo nooca daryeelka caymiska siyaadada ah, in
aad isku shirkad iyo isku khasnad bukkan iska diiwaan galiso oo heshiis la
Waa muhiim, marka doonaysid in aad shirkada khasnadda bukkaanka
heshiis la gasho ku saabsan nooca daryeelka caymiska siyaaddada ah in
aad codsigaaga foomamka warqadaha la buuxbuuxinayo aad si saxa oo
kaamil dhamaystirana aad u buux- buuxiso. Waayo shirkadaha khasnadaha bukkaankuu waxay xaq u leeyihiin codsiyada aanan taamka sugan
loo soo buuxin ama waxanan jirin iyo macluumaad khalada aan la aamini
karin ay ka buuxaan in aysan aqbalin ama heshiiskaba ay isaga baxaan oo
Sharcigu kuma qasbayo in shirkadaha khasnadaha bukkaanku in qof kasta
oo doonaya in daryeelka caymiska siyaadada ah uu iska diiwaan galiyo in
ay ogolaadaan, aqbalaan, taasaana u bannaynaysa in aysan ku qaadan
ama ku ogolaan iyakoo diidmadooda xaaladaha caafimaad darradaada ku
salysiinaya. Wixii faahfaahina ama macluumaad wacyigalina waxaad ka
heli kartaa kalana xiriiri kartaa akhbaaraha shirkadaha caymiska khasnadaha bukkaanka.
Wassarad qarameedka daryeelka caafimaadka
www.praemien.admin.ch > Xafiisyada maamul
goboleedyada qaabilsan khidmad raqiisinta
Tel. 031 324 88 01
CAYMISKA SHILLALKA IYO NAAFANIMADA
Shillalku meel kasta ayey ka dhici karaan. Hadaba Shillalka shaqada waxaa
loo fassiraa, kuwa rugta howlgalada shaqada ka dhaca ama iyada oo loo sii
socdo shaqada oo jidka loogu sii jiro dhaca. Dhacdooyinka Shillalka kale
oo idil waxaa lagu tilmaamaa oo lagu xisaabaa in aysan ahayn shillal shaqo.
Kuwaas waxaa soo galaya oo lagu tiriyaa, masalan shillalka waqtiyada
firaaqada oon la xoogsanayn dhaca ama kuwa ka dhaca ku sugnaanshaha
guriga, ama ciyaaraha Isboortiga.
Shaqaalaha Iwiiskiska oo idi waxey ku jiraan oo ka tirsanyihiin, caymiska
shillalka shaqada. Qofka shaqeeya in ka badan siddeed saacadood usbuucii wuxuu xattaa si toosa ugu jiraa, caymiska shilalka shaqada iyo kuwa
shaqada ka baxsanba. Qarashka caymiska shillalka waxaa wadajir u bixinaya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Tabaruca lacagta khidmada caymiskaaga shillalka si toosa ah ayaa looga goosanayaa dakhliga mushahaaradaada.
Ogaysiis ahamiyad wayn leh: Haddii ay shaqadu kaa joogsato ama aadan
mar danbe shaqaynayn waa in aad xissabta lacagta khidmada caymiska
shillalka loogu tala galay aad u gudbiso shirkada caymiska khasnadda bukkaanka aad ka tirsantahay.
Caymiska assasiga ah iyo adeegiisa daboolida qarshka shillalka
•Caymiska assasiga ah ee shirkada khasnadda bukkaanka waxay
awood sharci u leedahay aadna kula heshiin kartaa in ay kaa daboosho
adeegyada dhacdooyinka shillalka.
•Hadii aad shaqadaada owged, ay shaqadu kaa dabooshay caymiska
shillalka, xaqna aad u yeelatay oo aad ka tirsantahay, waa in aad shirkada
caymiska khasnada bukkaanka wargaliso oo u sheegto, si aanay kuugu
xisaabtamin oo kuu tirsan oo kaagana tirrtiraan liiskooda adeegyada
caymiska shillalka .Tassina waxay keenaysaa in khidmadii aad bixin
jirtay kaa raqiisto.
Ma dhacday masalan in uu shill kugu dhaco, oo kula soo darso, waa in aad
markiiba si deg deg ah aad u wargaliso loo shaqeeyaha ku howlgaliyey
ama shirkada khasnada bukkaanka aad ka tirsantahay. Arintaasi waxay
sharci ahaan dhaqangalaysaa iyadoo loo maro, nidaamka iyo dariiqa la
buux buuxinayo qoraalka foomka shillalka oo qaabka farsamada qoraalka
la adeegsanayo, waxaana foomka la buuxinayo laga codsan karaa loo
shaqeeyaha ku howlgaliyey, ama shirkada khasnada bukkaanka aad ka
Caymiska naafanimada (IV)
Naafanamida waxaa laga hadlaa marka la fassirayo awood la`aanta iyo
lixaad la`aanta jirka iyo maskaxda caqliga dhiman oo xannibaysa caaqibada kartida nollol u tabcashada howl-galnimada, muddada dheerna xaayaatada nuxuusinaysa ama gabi ahaanba qofku uusan shaqeysan karin.
Naafanimadu macnaheedu waa xannibaad qofku ka curyaansanyahay
nolosha shaqada iyo tabcashada xayaatada. Ugu horreynta wuxuu caymiska naafanimadu ku dhaqaaqaa tallaabooyin saacidaad garr-gaar ah iyo
dib u caaqibayn awooda kartida shaqo gudashada iyo how-fulinta.
Caymiska waayeelka iyo maatada (AHV)
Adeega iyo daryeelka caymiska waayeelka iyo maatada, wuxuu bixiyaa,
daryeelka qarashka gabownimada, wuxuuna bixiyaa oo daboolaa geerida
labada is-qabta ama dhimashada geerida waalidiinta midkood iyo maatada uu ka tagey oo ka xijaabtey. Iswiiska tabarucaadka iyo khidmooyinka
caymisyada bulshada ee naafanimada ama waayeelnimada waxaa si
toosa looga goostaa shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, waana sharci la isku
waayibiyo laguna qasbanayahay in la fuliyo.
Wixii akhbaaro faahfaahina oo intaas ka sii qodo dheer ama wacigalina
waxaad ka heli kartaa oo kala xiriiri kartaa, maamul qarameedka sare ee
adeegyada caymisyada dadwaynaha qaabilsan.
•Wassaaradda qaranka u qaabilsan maamulka caymisyada
www.bsv.admin.ch, [email protected], Tel. 031 322 90 11
• Xarrunta iyo xafiisyada qaabilsan maamulka akhbaaraha iyo
macluumaadka AHV / IV, www.ahv-iv.info, [email protected]
Macluumaadka wacyigalinta AHV iyo xeerarka heshiisyada ka
dhexeeya dallalka kala duwan:
•www.zas.admin.ch > Khasnada iswiiska u qaabilsan maamulka kabidda
iyo isu dheeli tirida xisaabaadka SAK
Tel. 022 795 91 11
• Xarrunta dhexe ee maamulka caymiska loo yaqaan tiirka 2
www.sfbvg.ch, [email protected], Tel. 031 380 79 75
• Ha`ayadda qaabilsan maamulka howlaha isku dubaridka
adeegyada caymisyo kala duwan BVG
www.aeis.ch, [email protected], Tel. 041 799 75 75
HABKEE IYO FARSAMDEE
TAKHTARADDA AMA TACHTARKA QOYSKA
Waa maxay takhtaradda ama takhtarka qoysku
adee-gyada daryeelka ama howsha ay u xil-saaran
Iswiiska waxaa u xilsaaran maamulka daryeelka caafimaadka assaasiga
ah, takhaatiirta qoyska. Takhaatiirta xaafadaha, caadiyan waa xarumaha
ugu horreeya iyo darajada ugu hoossaysa maamulka daryeelka caafimaadka oo laga soo bilaabo oo la iskana xaadiriyo markii la xannuunsanyahay, ama dhacdooyin shillal lala soo kulmo, iyagoo tachaatiirtaas fulinayaan daryeel dhakhtareed iyo talosiin cilmeyeysan oo caafimaad.
Marka ay takhaatiirta qoysku, si rasmi ah oo wanaagsan xayaatada bukkaanada / bukkaanka u yaqaanaan, oo taariichaha cuduradoodana si buuxda oo xeel dheerna u darseen, una xaqiisadeen oo isku hubaan, ayey si
sahal ah ugu tilmaami karaan waxa ka dhiman iyo cilladda xannuunkoodu
meeshay ka imanayso, islamarkaasna daryeelka ku habboon oo saxa ah
ay u hirgalin karaan, ama hadii loo baahdo ama lagama maarmaan ay noqotona ay u gudbin karaan takhaatiirta kale oo takhassuska u leh ama xarunta isbitaalka. Taa awgeed, ayey ku anfacaysaa markaad xannuunsantahay caadaysiga aad is-baraysid in isla takhtaradda ama takhtarka aad u
tagtid in aad rukumato. Taasi waxey dalbeysaa gogoldhigna u ah, in ay
muhiim tahay jiritaanka calaaqaad wanaagsan in uu idin dhax-yaalo. Waxana shardiya in aad ku kalsoontahay takhaatiirta, oonad maqsuud ku qanacsana aad tahay takhtaraddaada ama takhtarkaaga, daraymaysidna in
ay si fiican kuu fahmayaan.
Qarashkee ayuu bixinayaa oo la wareegayaa
caymiska khasnada bukkaanku?
Wuxuu caymisku bixinayaa oo la wareegayaa qarashka
uu ku kacayo daryeelka daaweynta takhtaradda ama
takhtarka qoyska, ama qarashka takhaatiirta takhassuska
leh ama biilalk xarunta daryeelka bukkaan socod eegtad
Daryeelka daawaynta carruurta
Sida aad adiguba takhtarad ama takhtar qoys u yeelan karto, ayey carruurtuna u baahantahay in takhtarad iyo takhtar carruureed ay u la-haadaan.
Tachaatiirtaas Waxay fuliyaan baaritaanada lagama maarmaanka ah, iyo
daaweynta baxnnaanada markuu ilmuhiu xannunsado. Tachaatiirta ilmuhu waxay kuu fassiraysaa,inta jeer ay lama huraan tahay in ilmaha baaritaano caafimaad lagu sameeyo. Ka sokow heerka ku sugnaanshaha xaaladda caafimaadka ilmaha, ayaa iyana waxaa si le`eg loo baaraa horumarka
koritaankiisa, iyo horukaca barbaarinta jirkiisa, waliba garaadkiisa, ama
xaaladaha schuccurta dareenkiisa iyo xaaladha qluubta niyadiisa.
Takhaatiirta takhasuuska leh
Baaritaanada baaxada ballaaran ama daaweynta daryeelka xubno iyo qaybo ka mid ah jirka insaanka (sida masalan, wadanaha, ama halbowlayaasha dhiig mareenada jirka) intuba howl-galadoodu daryeelka caafimaadka
waxaa fuliya takhaatiirta cilmigaa qeybtaas takhassusska u leh, oo lagu
magacaabo khubaraa`ada cilmiga caafimaadka. Takhaatiirtaas waxey cilmi iyo tacliin dheeraada oo heer sare ah uga soo baxaan, oo ku takhassussan qeybo khaasa oo cilmiga caafimaadka ka tirsan. Qaranka iyo maamulka dowladda sare ayaa kafaalad qaaday xil-gooniyana iska saaray in ay
xafidaan, korna ka ilaaliyaan maamuulka tacliinta sare ee caafimaadka, iyo
magacaabidda jegooyinka sare oo la xiriira tayadooda in ay heer sare ku
sugnaato. Xittaa tachaatiirta qoyska iyo kuwa carruurtuba intuba xirfa-
Xarumaha qaabilsan maamulka talasiinta cilmiyeysan iyo
wacyigalinta xannaanuada quluubta iyo maanka carqaladaysan
Iswiiska waxaa jira saldhigyo badan oo qaabilsan maamulka talasiinta
cilmiyeysan iyo wacyigalinta oonad kala xiriiri karto hadii aad u baahato in
lagaa caawiyo masalan qof qoyska ehelada ka tirsan ama aad isku
asaxsaabtihiin oo mashaakilaad la soo darseen ama loo baahado gargaar
talsiin cilmiyeysana iyo wacyigalin. Xarumaha maamulka talsiinta
cilmiyeysan waxay kaa caawinayaan masalan:
• Mashaakilaadka iyo xannuunada caadaysiga qabatinka mukhaadaraadka
• Mashaakilaadka kaala soo darsa reerka iyo qoyska
• su`aalaha la xiriira farsamada iyo cilmiga tarbiyada ilmaha, iyo
xannaanynta dhallanka saqiirka ah.
• Su`aalaha mas`alooyinka iyo xaajooyinka mowduucyada u khaaska ah oo
la xiriira dhadiga iyo laboodka ama dumarka iyo ragga
• Arimaha la xiriira daryeelka iyo sixadda caafimaadka galmada.
• Daryeelka caafimaadka ee la xiriira quluubta benii-aadanka .
Badanaa xafiisyada iyo xarumaha qaabilsan maamulka talsiinta cilmiyeysan
adeegoodu waa bilaash, waxaana ka howlgala shaqaale tacliin sare iyo
cilmi sare uga soo baxay mehradahooda iyo xirfadahooda wacyigalinta,
soona bartay (cilmiga maamulka bulshada, cilmiga daraasaadka,tarbiyada
iyo maamulka bulshada, ama cilmiga maanka iyo daraasaadka quluubta
insaanka (cilmu-nafsiga). La talyaasha iyo xirfadyaqaanadu waxey hoos
imanayaan oo qabanaya sharciyada ka dagsan asturidda macluumaadka
iyo xafidaada sirta insaanka bukkaanka ku sugan.-(Tixraacid Bogga 43).
Ka xog warayso, oo waydii tachtaradda ama takhtarkaaga, xafiisyada
maamulka tala-siinta cilmiyeysan ee kugu haboon oo kuugu dhow oo aan
kaa fogayn.- (Waxaad ka heli kartaa buuga talefoonada ama khadka
internedka cinwaanada xafiisyo badan oo qaabilsan maamulka tala-siinta
cilmiyeysan)(Tixraacid Bogga 11, 40, 53).
dahooda sare tacliin sare ee caafimaadka ayey uga soo qalin jabiyeen.
Caadiyan takhaatiirta tachassusska leh, waxaa kuu gudbin kara oo aad u
soo maraysaa tachaatiirta qoyska, hadii aad doonayso adigoon cidna u
soo marin ayaad takhaatiirta takhassusska leh la kulmi kartaa, laakiin
waxaa qasdigaas, kuu meel marayaa oo kuu suurtagalayaa, marka daryeelka caymiskaaga assaasiga ah ee shirkada khasnaddaada bukkaanka
kuu saamaxayo, oo uusan kaa xannibeyn (Tixraacid Bogga 21).
Cinwaanada takhaatiirtaas waxaad ka heli kartaa buuga talefoonada ama
internedka (Tixraacid Bogga 33).
Ogaysiis muhiima oo ku saabsan booqashada dhakhtarka: Saacada kulanka takhtaradda ama takhtarka waa in telefoonka ballanta horey loo sii
dhigto oo la sii carbuunto. Ma dhacday in aad baaqato oodan iman karin
ballantii kulanka dhakhtarka waxaad ku qasbantahay ugu yaraan nagaanshahaaga 24 saac ka hor xilligii ballantu ahayd in aad ballan baajin samaysid. Hadii kale waxaa dhici karta in qarsh lagugu soo dalaco madaama aadan xarrunta dhakhtarka soo wargalin oo sidaas aad lacag ku bixiso.
Ma ii bannaantahay oo ma la ii ogolyahay in
aan takhtaradda ama takhtarka ka badasho, hadii
aan dareen ahaan is-leeyahay laguma fahmin oo
aanan ku qanacsanayn?
Jawaabtu waa haa, oo xorr baad u tahay xulashada takhaatiirta, waanad
ka dooran kartaa kuwa dareen ahaan aad ku qanacsantahay. Qasdigaas
laakiin wuxuu meel mar kuu noqonayaa oo kaliya, marka caymiska caafimaadkaaga uusan ku dabrayn oo uuna ku xakkamaynanyn oo kuu saamaxayo xorriyada xulashadooda.(Tixraacid Bogga 15) Sida aad adiguba
xor ugu tahay xulashada takhtaradda ama takhtarka ayey takhaatiirtuna u
madax-bannaanyihiin xulashadooda marka ay bukkaanada ama bukkaanka cusub qaadanayaan oo diiwaan gashanayaan.
Waa isbitaalka iyo xarunta caafimaadka ee bukkaan socodka, aan lagu
hoyanayn, kana tirsan jaamicadda.
Waxaa kaleetoo xarumaha daryeelka tachaatiirta qoysaska ee xaafadaha
kuu sii dheer, oo bukkaanku marka horeba la xiriiri karo, baro kulan caafimaad ahaan oo kale, maamulada iyo xarumaha saldhigyada caafimaadka
loo yaqaan-(Polikilink) ama lagu tilmaamo, saldhigyada bukkan socod
eegtada (Ambula-torium).- Xarunta daryeelka bukkaan socod eegtada ee
loo yaqaan-Poliklinik-, waxay fulisaa daryeelada caafimadka oo bukkaanka la jiifinayno isbitaalka,waxayna u qalabaysantahay sida isbitaalka caadiga ah.- Xarrunta daryeelka bukkaan socod eegtada waxaa lagu xaliyaa, oo
lagu maamulaa, ballamaha kulamada takhaatiirta, adeega baaritaanada
cudurada, iyo daryeelka daawaynta bukkaanka. Adeegyada u baahan daryeelka iyo baxannaanada khaaska ahna waxaa loogu talagalay boolikiliinikyo gaara oo ku takhassusay cuduradaas khaaska ah. Xarrumada daryeelka caafimaadka ee boolikiliinigyadaa qaarkood waxay ku qaabilayaan
oo ku qaadanayaaan oo kaliya markii aad soo martay si toosana takhtarad
ama takhtar uu kuu soo gudbiyey. Cinwaanada poolikiliinigyada ku yaal goblkaaga waxaad ka heli kartaa buuga talefoonka ama khadka internedka.
Liiska cinwaanada takhaatiirta iswiiska
qaabilsan daryeelka qoyska ee xaafadaha loona
yaqaano (FMH) Iyakoo ku diiwaangashan loona
kala ratibay, gobolada ay ka tirsanyihiin, waliba
xirfadahooda qaybaha caafimaadka ay qaabilsanyihiin,
iyo aqoontooda fahamka luqadaha.
FARMASHIYAHA IYO DUKAANKA
Farmashiyaashu waa bara kulan caafimaad iyo xarumaha ugu muhiimsan
ee ugu horeeya oo markii la xannuunsanayo uu bukaanku tala-siin cilmiyeysan ka helo. Farmashistayaashu waa khubara`a tacliin sare uga soo
baxay xirfadooda, si xeel dheerna wax loo soo baray kuna takhasuusay
cilmiga maamulka daawada.Waxayna ku siinayaa hadii aad xannuunsato
talo awood aqoon cilmiyeed xanbaarsan. Sida hadba uu ku suganyahay
xaalkaaga caafimaadkaagu ayey daawada kuu siinayaan ama kuugu dirayaan takhtaradda ama takhtarka, ku haboon. Akhbaaraha iyo macluumaadka talsiinta cilmeyeysan ee xarunta farmashiyaha waa bilaash oo
bukkaanka lacag uguma fadhido.
Daawo oo dhan Iswiiska waxaa laga helaa farmashiyaasha. Intooda badana daawooyinka waad soo gadan kartaa adigoon takhtarad ama takhtarr u
soo marin. Daawooyinka qaarkood sida masalan daawada xannuun jabinta ama hurgun barrarka, caabuqaada iyo fasfaska lagu daaweeyo laguna
magacaabo anti-biyootikada, waxaad ku heli kartaa oo kaliya marka aad
ruqsad iyo qoraal warqad dhachtareed aad ka haysato takhtaradda ama
tachtarka. Daawooyinkaas waxaa shardiya oo lamgama maarmaana in ay
jirto cudur qeexid takhtareed, iyo waardiyentiisa uu kor kala soconayo
habka uu bukkaanku dawooyinka u isticmaalayo. Dawooyinka waxaad u
isticmaali kartaa oo kaliya xannuunkii laguugu qoray jiradaas oo kaliya ayaad u qaadan karta. Intaas ka sokow waa in aadan daawada qof kale u
gudbin oo siinin, islamarkaasnaa taariichdii dhicitaankeeda qarriran, oo
baakada korrkeeda ku xussan in aysan isticmaalkeeda kula dhaafin.Farmashiyaasha waxaad ka heli kartaa daawo dabiiciga geedaha. Hadaba
xog-wareyso oo kala tasho nooca daawada daryeelkaaga caafimaadka ku
anfacaya oo wax kuu tari kara.
Wacyigalin ahamiyad leh: Farmashiyaashu waxay si rasmiya korr ugala
socdaan, hab qoraalna ugu xafiddaan daawooyinka laga gado, ama qoraalada iyo warqadaha dawooyinka ay taachaatiirtu soo ansaxiyeen, iyakoo
bukaanka fayl iyo buug diiwaangalin daawo u furaya oo u samaynaya.
Adeega furitaanka faylkaas ama buuga diiwaangalinta daawada, waxaa
qarashka daawada ku kordhaysa qaddar yar oo dulsaara. Hadaba haddii
aad daawada hadba farmashiye cusub iyo farmashiyaal kala duwan aad ka
gadatid waxaad bixinaysaa mid kasta lacag iyo qarash gooniya oo dulsaara. Taa owgeed waa in aad hal farmashiye rukumato haddii aad isticmaasho daawooyinka u baahan qoraal iyo ruqsad dhakhtareed.
Farmashiyaashu waxay leeyihiin maamul qorshe gurmad badbaado oo
habeenkii iyo aakhirka usbuuca –fassaxa week-endiga dadwaynaha u fu34
Generika:Waa daawo ku salaysan koobbi, lagana naqiley
dawadii asliga ahayd
Daawooyinka geneerikada loo yaqaan waa koobi laga soo naqilay, ama
laga soo minguuriyey daawadii asalka ahayd, laakiin magac kale loo
bixiyey oo ku socota.
•Aad bay dawada asliga ah uga raqiisantahay, haddana xagga waxtarka
munaafacaadka iyo alaabta waxyaabaha qaacida ahaan ay ka koobanyihiin ama ku salaysanyihiin waa la sinji la mida daawada asliga ah.
•Gadashada daawooyinka lagu magacaabo geneerikada, waxay gaaraysaa caymiska khasnada bukkaanka waxdiisa loo yaqaan isku-ilaalinta ilaa
toban bersenti (Tixraacid Bogga 20) Daawooyinka asliga ah laakiin
koobiyadooda geneerikada ah la heli karo, wuxuu badanaa qiimahooda
caymiska caafimaadka waaxda loo yaqaan isku-ilaalinta kuugu kacayaa
oo gaarsiisanyahay ilaa 20 bresenti.
•Farmashistayaashu waxey awood buuxda u leeyihiin in warqadda qoraal
dhakhtareedka ay ku dhigantahay daawada asliga ah in ay ku baddalaan
daawo koobiya hadii aan si cad oo waadixa daawadii asliga ahayd loo
dalban. Hadaba had iyo jeer markaad daawooyin qaadanayso, dalbo oo
codso daawooyinka loo yaqaan generikada.
ran. Si aad u ogaatid maamulka farmashiyaasha kugu dhow oo xilligaas
adeegyada gurmadka fulinaya, waxaad kala xiriiri kartaa khadka telefoonka is-gaarsiinta oo laga waraysto akhbaaraha iyo macluumaadka barnaamijka dagaanka, lambarkiisuna yahay (Masalan . Tel. 1818, Auskunft auf
Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch). Lagulana xiriiri karo luqadaha
jarmalka, fransiiska, talyaaniga iyo ingriiska . La soco oo ka digtonow in
aad lacag dulsaara bixinayso haddii aad ka gadatid dawada farmashiyaasha u furan adeega badbaadada deg degta ah.
Shirkada caymiska khasnadda bukkaanku
qarashkee ayey bixinaysaa?
Shirkada khasnadda bukkaanku waxey la wareegaysaa
qarashka daawooyinka tachtaradda ama takhtarka ay soo
qoreen oo waliba kana tirsan liiska daawooyinka, loona
yaqaan liiska gaarka ah oo khaaska ah.
TACHAATIIRTA XANNUUNADA MASKAXDA
IYO CUDURADA WAALIDA, IYO DARYEELKA
DAAWAYNTA ADEEGA CILMU-NAFSIGA
Yaan garrgaar ahaan ula xirriiri karaa, haddii aan isku
arko xannuunada qluubta iyo cudurada khalkhalka
miyirka, aniguna aan iskayga waxba isugu qaban karin?
Tackhaatiirta qaabilsan cudarada waalida iyo khubara`ada cilmu nafsiga
aqoonta dheer u leh, ayaa intuba kaa gargaari karan, sidaad ula dhaqmi
lahayd ama isaga waabin lahayd mashaakilaadka kaaga furan dhanka miyirka iyo xassiloonaanta maanka.
Waliba xattaa garrgaar dheeraada ayey kuu fidinayaan oo ku siinayaan,
markey kula soo darsaan masalan: hurdada oo carqaladaysan, qarow iyo
sallal joogto ah, ama cabsi iyo calool xumo kadisa ay kugu beerantahay,
ama si joogta ah markay mashaakilaad baqdina iyo cabsi ay kuugu furantahay, ama ay ku haysato madluunimo iyo tiiraanyo ku curyaaminaysa
oo aad dareemayso niyad jab, naf nac iyo heer aad quusatay oo aadan
doonayn in aad nolosha ku sii waarto. Xatta haddii aad u silcaysid oo aad u
rafaadaysid xannuuno joogta ah, ama jismiga korkaaga aad cilado laxow
iyo xannuun ka dareemayso, laakiin howlgalada baaritaanada daryeelka
caafimaadka lagu hungoobo oo wax cudar ah ama natiijo ah oo muuqda
aan la helin, xattaa marxaladaas ayey takhaatiirta takhassusska xirfadeed
cuduradaas u leh awood cilmi u leeyihiin in ay mashaakilaadkaas aan
muuqan in ay kaa gargaaraan oo kaa daryeelaan.
Waa kuwee gargaarka iyo daryeelka daawo oo aan
Mashakilaadka quuubta iyo miyirka carqaladaysan waxey kaa xayirayaan
kaana hor istaagayaan fulinta xayaatadaadii nollol maalmeedka sidii caadiga ahayd in aad u raacato oo u noolaato. Gargaarka daryeelka caafimaadka iyo adeega daaweynta aad heli karto waa noocyo kala duwan,
wuxuuna u kala qeybsanyahay oo u kala ratibanyahay marxalado kala duwan.
•Marxalada daryeelka cilmu-nafsiga iyo farsamada daryeelka cilmiga cudur shaafisada, markaad ku sugantahay, oo daryeelkaas kuu socdo,
waxaa kuu furan oo suurtagal kuu ah in aad ka hadasho mashaakilaadka
amuuraha noloshaadu ku sugantahay, fikradaha iyo aaraada aad ku fakarayso iyo shucuurta niyadaadu dareemayso. Si wadajira iyadoo lala
kaashanayo daryeelka farsamada cilmiga cudur shaafisada loo yaqaan
(therapie), ayaa waxaa la raadinayaa xal lagu wanaagin karo sixadaada,
laguna hormarin karo xaaladaha caafimaadkaaga.
•Waxaa weheliya daryeelka farsamada cilmi cudur shaafisada, daryeel
daawo oo macnaha daawo ahaan loo qaadanayo. Daryeelka isticmaalka
dawooyinka waxey kaalin kaalmo ka qaadanayaan dajinta xissadaha
xannuunada korr u kacsan ee khalkhalka miyirka iyo qluubta sida masalan cabsida argagaxa culus, ama dawooyinku waxay naaqusinayaan
awooda murugta niyad jabka iyo madluunimada niyad xumida loo yaqaan (Depressionen). Dhaqangalinta daryeeladaada caafimaadka waxay
kaalmeynayaan in tartiib tartiib cudurkii laga soo kabsado, laakiin raysasho buuxda iyo natiijo caafimaad oo taama ma keeni karaan.
•Marka ay kugu furanyihiin mashaakilaad culuss oo noloshaadu xaalado
khattara ku sugantahay, ayaa waxaa kuu furan in aad codsan karto oo
dalban karto in laguu fidiyo gargaar, dhanka adeegyada mujtamaca, iyo
mid dhaqaale. Haddaba ka codso, oo ka xog-warayso maamulayaasha
takhassuska u leh, oo xaaladaha xannuunkaaga qaabilsan ama waxaad
codsiyadaada kala xiriir kartaa maamulka u furan addeegyada bulshada
Kala xaajood oo kala xiriir takhtaradda ama tachtarkaaga qoyska in fursadaha gargaarka in laguu fidin karo, iyo daryeelka farsamada cilmi cudur
shaafisada in laguu heli karo, ama wixii macluumaada kala xiriir baro kulamada xafiisyada iyo maamulada adeegyadaas qaabilsan (tixraacid Bogga
Saldhigyada tachaatiirta xannuunada maskaxda, ama isbitaalka
daryeelka cudurada maskaxda la xiriira, ama isbitaalka daryeelka
maalinlaha bukkaan socodka, ee xannuunada maskaxda.
Daryeelka caafimaadka ee takhaatiirta xannuunada maskaxda / khubara`ada daryeelka farsamada cilmiga cudur shaafisada / Tachaatiirta daryeelka cilmu-nafsiga, intuba waxay ka howlgalaan saldhigyada daryeelka
caafimaadka maskaxda ama isbitaalada daryeelka cudurada maskaxda la
xiriira, ama isbitaalada daryeelka bukkaan socodka maalinlaha ah, ee qaabilsan xannuunada la xiriira maanka iyo quluubta insaanka. Isbitaalada
daryeelka xannuunada la xiriira maskaxda qaabilsan waxaad ka heleysaa
daryeelo talasiin cilmiyeysan, iyo daawayn caafimaad oo kala duwan iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka cilmiga cudur- shaafisada, oo xaaladaha aad ku sugantahay kaaga garrgaari kara.
Shirkada caymiska khasnada bukkaanku
qarashkay la wareegaysaa oo bixinaysaa?
•Caymisk khasnada bukkaanku wuxuu bixinayaa qarashka
ku baxa daryeelka farsamada cilmu-nafsiga,hadii daryeelkaas iyo daawayntuba ay u howlgaleen oo hogaaminayeen
aqoonyahano qaabilsan xannuunada ku dhaca maskaxda.
Waliba dhacdooyinka iyo xaaladaha qaarkood waxaa la isku
xiraa oo shardiya in helitaanka daryeelka noocaasaa loo
soo maray ayna soo ansixiyeen oo soo gudbiyeen takhtaradda ama takhtarka qoyska.
•Maamulka caymiska khasnada bukkaanku ma bixinayo
qarashka daryeelka farsamada cilmiga cudur shaafisada,
aan takhtaradda ama takhtarka loo soo marin, ruqsadna
aan laga soo qaadan. Marka aad xaalada noocan oo kale ah
ku sugantahay, waxaad u baahantahay caymiska siyaadada
ah ee khaaska ah oo daboola, bixiyana qarashyada
daryeelka noocan oo kale ah . (Tixraacid Bogga 24)
Xeer gooni u yaala: hadii daryeelka farsamada cilmiga
cudur shaafisada ay u howlgalaan oo hogaaminayaan
aqoonyahano cilmu-nafsiga ku takhassusay kana hirgaliyaan oo ka fulinayaan saldhiga iyo xarrun dhakhtareed
(islamarkaasna talada howsha daryeelka farsmada
cilmiga-cudur shaafisada looga danbeenayo takhtar oo uu
hogaaminayo madaxna ka yahay) ayaa oofinta shuruudahaas caymiska khasnadda bukkaanku kula wareegayaa oo
ku bixinayaa qarashka. Hadaba weydii oo xogwareyso
ballanta iyo kulanka u horeeya ee khubara`ada xirfadyaqaanada daryeelka farsamada cilmiga cudur-shaafisada, hadii
caymiska khasnada bukkaanku qarashka daryeelka la
wareegayo ee uu bixinayo iyo hadii kale.
Sideen ku heli karaa xirfadyaqaan takhassuss u leh
mashaakilaadka i haysta?
Takhtaradda ama takhtarkaaga kala xiriir, kana codso oo kala xaajood xaaladaha noloshaadu ay ku sugantahay. Takhtaradda ama takhtarkaaga ayaa
awood cilmi u leh kuuna xuli kara oo kuu gudbinaya xirfadyaqaanada munaasabka ah, ama isbitaalada qaabilsan daryeelkaaga. Horta weydii si aad
ku ogaato maamulada daryeelada farsamooyinka cilmiga cudur-shaafisada, haddii luqadaada hooyo ay ka tirsantahay luqadaha daryeelka loo isticmaalo oo la isku fahmo. Waxaa jira xirfadyaqaano asalkooda ajaaniba,
•Tachaatiirta xannuunada maskaxda la xiriira qaabilsan, waa tachaatiir
ku takhassustay cilmi sarena u leh xannuunada ku dhaca maskaxda
insaanka iyo daryeelka adeega farsamada cilmiga cudur –shaafisada.
•Aqoonyahanada cilmu-nafsiga waxey tacliin sare uga soo baxaan
cilmiga loo yaqaan cilmu-nafsiga.
•Aqoonyahanada daryeelka farsamada cilmiga cudur shaafisada ma aha
takhaatiir, laakiin caadiyan cilmigooda jaamicad ayey uga soo baxeen
iyakoo tacliin dheeraada uga soo qalin jabiyey cilmiga daryeelka
farsamada cilmiga cudur-shaafisada (psychotherapie). Laakiin ma aha
takhaatiir, taa aowgeed misaal ahaan uma xilsaarna umana leh ruqsad
ay daawo ku bixiyaan.
•Daryeelka caymiska khasnada bukkaanka wuxuu bixinayaa qarashka,
lana wareegayaa biilallka, markii adeega daryeelka farsamada cilmiga
cudur shaafisada ay u howlgalaan soona hirgaliyeen aqoonyahano
adeega farsamada cilmiga cudur shaafisada qaabilsan, laakiin ruqsad iyo
amar tachtareedna lagu fuliyey. (Tixraacid, Bogga 38)
kuna takhassusay farsamada cilmiga cudur-shaafisada, walibana ku hadla
luqado kala duwan. Aad bay muhiim u tahay xirfadyaqaan aad si buuxda
ugu kalsoontahay in aad heshid.
Hadii si kadisa oo lama filaana laguugu soo boodo oo badbaado gurmad
aad u baahatid, waxaad dhacdadaas si toosa ula xiriiri kartaa isbitaalaka
daryeelada xannuunada maskaxda la xiriira qaabilsan, ama xarunta daryeelka caafimaadka xannuunada maskaxda iyo quluubta qaabilsan. Maamulada isbitaalada xannuunada maskaxda waxay leeyihiin adeegyo daryeel oo loogu tala galay, lagalana xiriiri karo, dhacdooyinka deg degta ah
ee gurmadka badbaaddada u baahan, iyakoo xaaladaha xissadaha korr u
kacsan kaaga gargaaraya.
Cinwaanada lagala xiriiri karo xarumaha maamuladaas ee qaabilsan dagaankaaga waxaad ka heli kartaa buuga talefoonka.Hadii ay dhacdo si lama
filaana in laguugu soo boodo oo aad u baahato daryeel gurmad badbaado
oo deg dega waxaad u yeeran kartaa ood kala xiriiri kartaa khadka telfoonka gurmadka badbaadada ee lambarkiisu yahay 144 (Tixraacid Bogga 43).
• Waxaad akhbaaro ku qoran luqado kala duwan iyo
wacyigalin ku saabsan daryeelka caafimaadka qluubta iyo
maskaxda ka heli kartaa:
• pro mente sana – Xarunta maamulka talasiinta cilmiyeysan ee
bukkaanka iyo eheladiisa www.promentesana.ch, Tel. 044 563 86 00
• Urrurka garrgaarka gacan qabashada – 143 – Wacyigalin iyo talsiin
waliba sirtaadu qarsoontahay ee khadka talefoonka
www.143.ch, [email protected], Tel. 143 / 031 301 91 91
Cinwaanada kooxaha isku-bahaystay iskaa isu garrgaar oo ka dhisan
gobol kasta loona yaqaan (Selbsthilfegruppen):
Maamulka isku-xiridda iyo hormarinta kooxaha isku-bahaystay iskaa
isu-garrgaar ee iswiiska loona yaqaan - KOSCH,
Tel. 0848 810 814 / 061 333 86 01
Carruuta iyo dhalinyarada:
Beratung 147 Pro Juventute – Wacyigalin iyo talasiin bilaasha, sirtuna
asturantahay ee khadka talefoonka, iyo calaaqaad wada-hadal sheekaysi
qarsodi ah oo sirtuna xafidantahay, ee khadka elektroonikada, looguna
tala galay carruurta iyo dhalinyarada, iyadoo waliba adeegyadaas la
fulinayo, xilliyada xaaladaha caafimaadku ay khatar ku suganyihiin oo
mashaakilaadku kor u kacsanyihiin, iyo marka nolosha xaalado khatar
iyo dhibaatooyin soo food saaraan oo marxalada xunna lagu jiro.
Garrgaarka iyo macluumaadka talasiinta loogu tala galay bulshada
daanooyinka la soo kulantay ciqaabta silciska jirdilka iyo colaadda
• Xarunta caafimaadka bukkaan socodka iyo bukkaanka la soo
kulmay silica ciqaabta jirdilka iyo dhibanaha dannooyinka colaada
Schweizerisches Rotes Kreuz, Werkstrasse 16, 3084 Wabern
www.redcross.ch, [email protected], Tel. 031 960 77 77
• Xarunta caafimaadka bukkan socodka iyo bukkaanka la soo
dagaalada, Daryeelka isbitaalka bukkaan-socodka ee xannuunada
la xiriira maskaxda Universitätsspital Zürich,
8091 Zürich, www.psychiatrie.usz.ch, Tel. 044 255 52 80
• Consultation pour victimes de la torture et de la guerre Genève,
ctg Genève, Département de médecine communautaire,
Rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 14, www.hcuge.ch,
Tel. 022 372 53 28
• Consultation pour victimes de la torture et de la guerre Lausanne,
Appartenances, ctg Lausanne, Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne,
www.appartenances.ch, [email protected], Tel. 021 341 12 50
DARYEELKA CAAFIMAADKA EE
Ilkaha xannuunsan kaligood iskama bogsaoonayaan oo iskama raysanayaan ee waxaa shardiya oo ay u baahanyihiin daawo iyo daryeel caafimaad. Hadiid adiga ama ilmahaaga mashaakilaad dhanka ilkaha idin ka
haystaan, waa in aad u tagto oo la xiriirto tachaatiirta daryeelka ilkaha qaabilsan. Cinwaanada takhaatiirta ilkaha gobolkaaga, waxaad ka heli kartaa
buuga telefoonka ama internedka,(tixraacid, Bogga 42)
Aad bay muhiim u tahay in mar hore tachaatiirta ilakuhu arkaan iliga xannuunsan si ay u daaweeyaan oo wax uga qabtaan. Inta muddada xannuunka ilkaha la sii dheeraysto, oo mashaakilaadka lagala daaho takhaatiirta
ilkaha, waa inta ay mushkiladu inta ka sii ballaaranayso, oo qarashkeeda
daryeelkuna inta ka sii badanayo.
Ma bilaash-baa dayactirka ama baaritaanka
Jawaabtu waa maya, oo caadiyan bukkaanka qaangaarka ah waa in qarashka adeega baritaanka iyo fatashaada ilkaha uu iska bixiyo. Carruurta
gaartay da`da iyo cimriga iskuulka lagu dhigto waxaa hal mar sannadkii
adeega daryeelka ilka baaritaanka u soo booqda, tachaatiirta iskuulada
daryeelkaas u qaabilsan. Badana adeega daryeelka iyo baariaanada ilkaha
ciyaal iskuulka waa bilaash oo u xil-saaran. Maamulada degmooyinka ee
gobolo badan, ayaa abaabula adeegyada daryeelka ilkaha ciyaal iskuulka
oo qarashkana bixiya.
Carruurta ilkahoodu jirranyihiin waxaa adeega dayactirka iyo dareyeelka
daawaynta qarashka lagu soo dallacaa waalidka oo bixiya. Hadii adeega
daryeelka ilkaha aadan bixin karin, waa in aad u tagto, ood iska xaadiriso
maamulka adeegyada arimaha bulshada ee degmadaada qaabilsan. Degmooyin waxaa jira qarashka qaar la wareega oo bixiya.
Shirkada caymiska khasnada bukkaanku immisa
ayey qarashka la wareegaysaa oo bixinaysaa?
•Caymisku waxuu qarashka la wareegaya hadii adeega
daryeelka dayactirka ilkaha uu ku salaysanyahay aafo cudur
oon sina looga fakadeen, oo kana soo askuntay cuduro ku
dhacay waxyaha jirka wax lagu ruugo sida ciridka iyo
jaqalada ama hadii aafadu jirro culus ka timid.
•Dhacdooyinka shillalka ilkaha ku dhaca waxaa qarashkooda
daboola daryeelka adeega caymiska shillalka.
•Asalkeedaba baaritaanada iyo dayactirka ilkaha waa shardi
in bukkaanku iska shubo oo bixiyo. Waxaa taa la mida oo
bukkaanku ku qasbanyahay in uu qarashka bixiyo daryeelka
dayctirka sixida iskuduwida iyo sinnaanta kala ratibidda dib
u habeynta ilkaha, ama siibidda gows-xikmeedka danbe.
Munaasabada adeegaan ilko sixidda iyo kala ratibidda, ayaa
waxaa bulshada lagu baraarujinayaa in khaas ahaan
carrurta iyo dhalinyarada loo sameeyo oo laga bixiyo
caymiska dheeraadka ah ee daryeelka sixada ilkaha. Wixii
macluumaada iyo wacyigalina kala xiriir oo ka xogwarayso
shirkada caymiskaaga khasnadda bukkaanka.
• Maamulka urrurka tachaatiirta ilkaha ee
www.sso.ch, [email protected], Tel. 031 310 20 80
GARRGAARKA GURMADKA BADBAADADA
DEG DEGTA AH
Gargaarka gurmadka badbaadada deg degta ah, waa markay noloshu ku
sugantahay xaaldo iyo dhacdooyin khatar halisa, sida dhawacyo hallissa,
sunn, hollac gubasho ama xannun kaddis ah oo ku soo booda ah iyo sakaraadnimo culus oo u baahan adeeg iyo daryeel deg deg ah. Gurmadka
badbaadada waxay takhaatiirtu ku qasbanyihiin (xattaa bulshada aan sharciga daganaanshaha lahayn) in gargaar daryeel oo deg dega ay u fidiyaan
ama bukkanka ay u sii gudbiyaan xarumaha iyo saldhigyada munaasabka
ah oo daryeelkiisa caafimaad qaabilsan.
Amuuro dhacdooyin ku saabsan gargaarka
gurmadka deg degta ah, haday ila soo gudboonaadaan,
tallaabooyinkiee la iiga baahanyahay in aanku
Dhacdooyinka xaaladaha gurmadka badbaadada u baahan hadey kula soo
darsaan waxaa shardiya in shaqsiga ugu horreeya ood la xiriirto uu noqdo
takhtaraddaada ama takhtarkaaga qoyska, waliba xaaladu markay birmad
deg dega u baahantahay, laakiin aysan xaaladu halliss khattara oo geeri
iyo nollol taagnayn. Takhaatiirta qoysaska ee iswiiska oo dhan waxey leeyihiin gargaarka adeega daryeelka gurmadka badbaadada, oo waliba habeenamadii shaqeeya ama aakhirka usbuuca iyo week-endiga. Ma dacday in
aad tachtaradda ama tachtarka goyska ku qaabilsan aad haleeli kari waydo, waxaa jira fursadda badanaa ay fartiimo ku duubanyihiin cajaladda talefoonka oo kuu tilmaamaya, habka takhataradda ama takhtarka gargaarka adeega gurmadka badbaadada waardiyheedda iska leh aad ku haleeli
karto. Magaalooyinka waa wayn oo idil, waxay leeyhiin farmashiyaal
adeega gurmadka badbaadada u howlgala Notfallapotheke (Tixraacid
Bogga 34) oo xattaa habeenkii ama aakhirka –wiik-endiga furan. La xirriir
isbitaalada qeybtooda adeega garrgaarka gurmadka badbaadada, waliba
xaaladaha iyo dhacdooyinka halista khatarta ah ee culus, oo naftuna geeri
iyo nolol ku sugantahay. Badanaa isbitaalada waa weyn oo idil ee dadweynaha waxaa ka howlgala oo ay leeyihiin qaybta maamulka adeega gurmadka badbaadada oo maalintii mujtamaca 24-ka saac u shaqeeya oo u
furan. Ma dhacday in aad u baahato bukkaan-qaade, waxaad kala xiriiri
kartaa telefoonka qeylo raaca baaqa birmadka (144) ee kooxda gurmadka
iyo feydhowrka caafimaadka.
(Sanitätsnotruf Tel. 144). Sida xeerka u yaal waxaa bukkaan qaadku gaadiid u yahay sakaraadka oo qura. Ta macnaheedu waa ka mammnuuc dad
wehel ah in ay sii raacaan. Bukkaan qaadka qarashkiisa, waa in qeyb ka
mid ah, uu bukkaanka laftigiisa la baxo. Waxaa danta dhaqaaluhu ku jiraa
in gaadiidka bukkaan qaadka kaliya la isticmaalo markii bukkaanku xaalaadaha uu ku suganyahay aysan xamili karin gaadiid kale, sida, baabuurta
yar yar, Taxi-ga, baska, ama taramka.
La xiriirka iyo khadka telfoonka 144 ee gurmadka
Aad bey muhiim u tahay in xaaladaha adeega gurmadka
badbaadada u baahan, aad si buuxda uga warranto una
sharaxdo sida ay wax u jiraan ama wax u dhaceen.
•Kobteed ka soo hadlaysaa?
•Ilaa iyo xilligaas lagu suganyahay, tallaabooyinkee ayaad
horayba ugu dhaqaaqday ood u hirgalisay?
Waa immisa qarashka shirkada caymiska
khasnadda bukkanku la wareegayso oo u
•Wuxuu caymisku bixinayaa oo la wareegayaaa qarashka uu
adeega daryeelka gurmadka badbaadadu ku kaco. Haday
kula soo darsaan iswiiska mashaakilaad daryeel oo gurmad
babaado u baahan, waxaad xaq u leedahay adeega takhtarad ama takhtar kasta, ama isbitaal kasta iyo xarumaha
caafimaadka ka furan iswiiska oo idil in aad iska xaadiriso
ood u tagto, hadii xattaa nooca caymiska caafimaadka aad
ka tirsantahay uusan kuu saamaxayn oo uusan kuu
ogolaanayn xulashada takhaatiirta, oo aad horay u dooratay
caymisyada caafimaadka noocyada loo yaqaan (HMO,
takhtarka qoyska ama Telmed, Tixraacid Bogga 21).
•Shirkada daryeelka caymiska khasnada bukkaanku, waxay
la wareegaysaa oo bixinaysaa qarashka gaadiidka bukkaanqaadka nusskiis, laakiin cadadkaas oon korr u dhaafi karin
sannadkii shan boqol oo franki (500.- Franken).
•Badbaada samataixinta dadka noloshoodu khatarta
halista ah ku sugantahay sida (masalan, dhacdooyinka
shillalka ka dhaca buuraha, ama dhacdada wadnaha oo
qofka istaaga) intuba sidoo kale shirkada daryeelka
caymiska khasnadda bukkaanku waxay bixinaysaa oo la
wareegaysaa qarashka nuskiis, waliba ilaa iyo caddadka
xisaabta gaaraysaa sanadkii shan kun oo franki (5000.Franken).
ISBITAALKA BUKKAAN JIIFKA
Mashaakilaadka qofka dhanka caafimaadka kala soo darsa oo u baahan
daryeelada caafimaadka sida baaritaanada caafimaadka qoddada dheer
oo aadna u ballaaran, ama daryeelka farsamada cilmiga cudur-shaafisada
oo afka qalaad loo yaqaan (therapien) ama daryeelka qalitaanka, intuba
waa howlaha daryeeelkooda caafimaad laga fuliyo isbitaalada iyo xarumaha bukkaan jiifka.- Waxaa daryeelka caafimaadkaas lagu tilmaamaa
daryeelka bukkaan jiifka – (macnaha bukkaanku waa isbitaal-jooge la seexinayo isbitaalka).
Haddii aan bukkoodo iskayga iyo toos ma isaga xaadirin
karaa oo iskayga ma u aadi karaa Isbitaalka?
Jawaabtu waa maya, oo awooda ruqsada lagu tagayo isbitaalka bukkan
jiifka waxaa iska leh, tachtaradda ama tachtarka, ama tachaatiirta takhassusska u leh. Laakiin waxaa jira xaalad xeerkaas ka baxsan iyo qiil hadii la
helo kuu saamaxaya: Masalan, xaq baad u leedahay waana kuu bannaantahay in aad isbitaalka si toosa u tagto oo isaga xaadiriso adigoon
tachaatiir soo marin laakiin waa haddii dhacdooyinka xaalado daryeelka
gurmadka badbaadada deg degta ah u baahan ay kula soo gudboonaadaan oo kula soo darsaan. (Tixraacid Bogga 42).
Siday howlaha daryeelka isbitaalku u kala socdaan,
maxaase lagala kulmaa isbitaalka?
Bilowga galitaanka isbitaalka iyo qaabilaada bukkaanka la diiwaangalinayo, ayaa waxaa qoraal ahaan laga arruuriyaa macluumaadka ugu muhiimsan bukkaanka oo ku saabsan shaqsiyadiisa gaarka ah. Haday lagama
maarmaan noqoto iyadoo la tixgalinayo nooca caymiska khasnada bukkaanka uu ka tirsanyahay (Tixraacid Bogga 21) iyo mashaakilaadka cudurka haya iyo xannuunkiisa, iyadoo bukkaanka loo gudbinayo oo la dajinayo
qeybta isbitaalka daryeelkiisa u howlgalaysa. Waxaa qeybaha kala duwan
loo kala saaraa, ta guud oo koox ahaanta loo daganyahay (waa qol sariiro
badan) ama laba wadaag (waa qol laba sariiro taalo, oo loo yaqaan nussbrivaati) iyo kali dagannaansho, oo nafar gooniya in uu dago loogu tala
galay .(waa qol hal sariira taalo, loona yaqaan brivaati).
Yaa u xilsaaran isbitaalka daryeelkayga iyo
Qeybta saldhig kasta waxaa qaabilsan oo u xilsaaran, masu`ulna ka ah,
tachtarad ama tachtar saldhigeed. Waxaana suurtagala in isbitaalka ay
takhaatiir fara badan kaa taxadarayaan, oo daryeelkaagana isku xilqaamaan, inkastoo ay dhici kaarto mar marka qaarkood takhaatiirta takhassuss
leh, hadey lagama marmaan noqoto in mushkilad khaasa oo ku saabsan
daryeelka bukkanka in, ciidan ahaan loo howlgaliyo, oo lo adeegsado.
Howsha baxannaanada iyo xannanaynta isbitaalka inteeda badan waxaa
hirgaliya oo u howlgala oona fuliya kalkaaliyaasha qeybta jamacooda rag
iyo dumarba. Kalkaaliyaashu waa xirfadyaqaan cilmiga daryeelka iyo baxannaanada bukkaanka tacliin khaasa uga soo baxay oo si wadajira tachatiirta uga garab-shaqeeya.
Jadwalka qorshaha nolosha maalintu iyo qaab nololeedka daryeelka isbitaalka, waxay ku salaysanyihiin xerrar iyo qaannuuno kala haga maamulka iyo howlaha daryeelka isbitaalka caafimaadka. Masalan: Xeerar iyo
sharciyo ayaa ka dagsan waqtiyada eheladaadu ku soo booqan karto oo
isbitaalka kugu soo siyaaran karto, ama waqtiyada loo qorsheeyey raashinka oo loogu tala galay. Hadaba, macluumaadka wacyigalinta xeerarka
ka dagsan nolosha daryeelka isbitaalka kala xiriir oo ka xog warayso
kalkaaliyaasha daryeelka caafimaadkaaga qaabilsan. Isbitaalada qaarkood waxey leeyihiin qoraalo daabacan oo ay howlahooda iyo adeegyadooda ugu muhiimsan uga waramaan, kuna qoranyihiin macluumaadka iyo
daryeeelka ay bulshada u fidiyaan una soo bandhigaan.
Daryeelka qalitaan kasta waxaa ku dahsoon oo ku daboolan lana xiriiri
kara khataro uu u gaysan karo una keeni karo bukkaanka. Taa wogeed
Maamulka adeegyada khaaska ah ee samafalka bulshada ee
Hadii aad ka walbahaarsantahay mashaakilaadna kaa haystaan dhinaca
dachliga dhaqaalaha ama dhibaatooyin kaa haystaan xaalado la xiriira
shaqada, ama caymiska, waa in aad kala xiriirto oo aad wargaliso qeybta
isbitaalka u qaabilsan maamulka samafalka adeegyada arimaha bulshada.
•Maamulka adeegyada khaaska ah ee samaflka arimaha bulshada
isbitaalka, wuxuu qaabilsanyahay xallinta mashaakilaadka la xiriira
mujtamaca ee la soo darsa xilliga bukkaanku xannunsanyahay, oo uu ku
jiro kuna suganyahay isbitaalka.
•Maamulka xoghaynta adeegyada samafalka arimaha bulshada waxaa ka
howlgala maamulayaal cilmigaas soo bartay oo tababar tacliimeed uga
soo baxay tacliinta maamulka samfalka bulshada, oo xil-gooniya iska
saara, heeganna u ah talasiint-cilmiyeysan iyo gacan siin gargaareed ee
bukkanka iyo qoyskiisaba.
•Maamulayaasha adeegyada samafalka arimaha bulshada ee isbitaalka
waxey hoos immanayaan xeer dhowrida cahdiga wacadka iyo xafiddaada xajinta sirta bukkaanka ka dagsan (tixraacid Bogga 60). Howshooduna waa ka xorr waana ka madax-bannaantahay samafalka bulshada ee
•Howsha iyo adeegyada ay maamulayaasha samafalka bulshada
isbitaalku u fidiyaan bukkaanka iyo eheladiisa lacag uguma fadhido oo
waa u bilaash.
ayaa xaalada bukkaan kasta, marka hore aad looga baaraan dagaa, oo laa
isku taxluujiyaa in loo dhabagalo, iyadoo la kala qeexayo oo la shaandhaynayo, haddii ay jiraan farsamda daryeel oo kale, oo looga fakan karo qalitaanka ama haddii tabarta caafimaadka bukkaanku ay saamaxayso qalitaanka oo uu xammili karo. Ma dhacday in aad qarka kaabiyadda u saarantahay
qalitaan, oo ay lagama maarmaan noqotay, dariiq loga leexdana aysan jirin, markaas waxaa si buuxda oo faahfaahisan kuugu waramaya oo casharo ku saabsanna kaaga iftiiminaya tackhaatiirta isbitaalka iyakoo tallaabo
tallaabo iyo marxalad marxalad qaabka qalitaanku u dhacayo iyo khataraha ka iman kara kuugu sharaxaya.
Howsha qalitaanka waxay bilaabanaysaa oo la guda galayaa, markii aad
adigu raali ka noqoto oo ruqsad buuxda lagaa helo. Intaas waxaa kuu sii
dheer in aad saxiixdo qoraalka heshiika oo cadaynaya in aad raali ka tahay
howlgalka qalitaanka oo ogolaanshahaaga lagu fulnayo (Einverständniserklärung) (Tixraacid Bogga 60). Dhacdooyinka gurmadka badbaadada
waa xaalado naf-samanta bixina oo xeerarka caadiga ah ka baxsan oo aan
waafaqsanayn. Xaaladaha gurmadka iyo adeega daryeelka deg degta ah
owgeed looma baahna ruqsada heshiis iyo qoraal la saxiixayo, sababtaa
gurmadka ah, daradeedna ayaa looga tanazulay.
Hadaba had iyo jeer su`al oo weydii arimada mugdiga kaaga jiro ama aadan fahmin. Xaq baad u leedahay, waana kuu bannaantahay in aad si rasmiya uga warqabtid oo aad xog-ogaalna u tahay xaaladda marxalada
nafsadaadu ku sugantahay. Isbitaalada waa weyn oo idil waxey leeyihiin
adeega iyo maamulka is-fahamka turjubaanimada. Haddaba weydii oo ka
xog-wareyso kalkaaliyaasha, iyo tachaatiirta ku qaabilsan in adeega isfahamka tujubaanimada laguu heli karo. Wixii akhbaaro iyo macluumaada
oo intaas ka faahfaahisan waxaa ka heli kartaa qoraalada kuu sharraxaya
oo ay ku daabacantahay xuquuqda iyo waajibaadka bukkaanka (Tixraacid
Daryeelka baanashada dib u dajinta bukkaanka, iyo habka
daryeelka farsamada cilmiga cudur-shaafisada
Mar marka qaarkood, waxaa loo baahanyahay qalitaanka ka dib ama jirada
ama dayactirka dhaawaca, in la helo daryeel iyo baanasho buuxda si bukkaanku si lixaad leh uu uga soo kabsado xannuunka una soo ceshado
awoodii isku-filnaanshihiisii hore. Daryeelkaas baanashada ku salaysan
dib u daaweynta bukkaanka waxaa lagu magacaabaa daryeelka baanashada iyo dib –u dajinta bukkaanka . Daryeelkaas wuxuu noqon karaa mid
lagu hirgaliyo hab bukkaan socod (Ambulant) ama hab bukkan jiif (Stationär), Baanashada iyo daryeelka dib u dajinta noocaasa tachaatiirta qaabilsan oo u howlgala waxey qoraaladooda ku muujiyaan in la dhaqangaliyo
farsamooyinka daryeeladda cilmiga cudur-shaafisada khaaska ah loona
yaqaan afka qalaad – therapien- sida masalan daryeelka cilmiga farsamada cudur-shaafisada qaabilsan dhaqdhaqaaqa duugista jimicsiga murqaha, loon yaqaan (Physio-therapie), iyo daryeelka cilmiga farsamada cudur-shaafisada qaabilsan dib uga shaqeysiinta xubnaha kala goosyada
oogada jirka, oo loona yaqaan (Ergotherapie).
Shirkada caymiska khasnnada bukkaaku immisa
•Shirkada caymiska waxay bixinaysaa qarashka adeega ku
sugnnaanshaha joogitaanka isbitaalka, adeega baaritaanada caafimaadka daryeelka daawaynta, daryeelka adeegyada qeybta caadiga ah ee isbitaalka sharciyeysan oo
ictiraafka aqoonsiga leh, iyo adeegyadiisa la xiriira ee
daryeelka baxannaanada iyo xannaanaynta bukkaanka.
•Shirkada caymisku waxay bixinayasaa daryeelka dib u
dajinta bukkaan socodka iyo bukkaan jiifka loona yaqaan
(Ambulante / stationäre) iyo daryeelada tachtarku soo
qoray ee farsamooyinka culmiga cudur shaafisada-(sida
masalan daryeelka farsamada cilmiga cudur shaafisada
dhaqdhaqaaqa iyo jimicsiga xubnaha jismiga iyo duugida
murqaha qaabilsan iyo daryeelka farsamada cilmiga cudur
shaafisida loo adeegsado dib uga shaqaysiinta xubnaha
jirka iyo kala-gooysyada. Loona kala yaqaano (Physiotherapie /Ergotherapie).
•Shirkada caymiska khasnada bukkaanku waxay
bixinaysaa qarashka toban Franki maalintii oo adeega
daryeelka baxaannaanada dabaasha oo uu soo qoray
tachtar iyo waliba iyadoo ay shardi tahay xarunta
daryeelka dabaasha laga fulinyo in ay aqoonsi-ictiraaf oo
sharciyeysan leedahay (wuxuuna bixinayaa caymisku
sanadkii ugu badnaan 21 bari).
DARYEELKA CAAFIMAADKA XILLIGA LAGU
SUGANYAHAY XAAMILANIMADA UURKA IYO
XILLIGA FOOSHA DHALMADA LAGU JIRO
Sugida sixada caafimaadka iyo dareenka ammaanka xasiloonaanta aad
bey muhiim ugu yihiin nolosha qofka xaamilada uurka leh iyo ilmaha uurka
lagu sido oon wali dhalan. Iswiisku wuxuu leeyahay daryeel caafimaad oo
baaxadiisa adeegyada xananaanada ay aad u ballaarantahay looguna tala
galay daryeelka sixada caafimaadka muddooyinka ka hor ama ka dib xilliyada lagu suganyahay xaamilanimada iyo foosha dhalmada.
Garrgaarkee ayaan heli karaa, xilliga xaamilanimada
Haddad isku tuhmaysid in aad uur leedahay, waxaad farmashiyaasha ama
dukaanada waaweyn ka soo gadan kartaa, baakad-daaweedka qalabaysan oo lagu imtixaano, laguna xaqiiqsado, uur-qaadida, adigoo iskaaga
imtixaanka uurka lagu hubsado isaga qaadi kara.
Hadii ay dhacdo, hubaalna ay noqoto in aad uur leedahay, waa in aad ugu
horrayntii kullanka talasiinta caafimaadka ee ugu horreeya aad si too toosa ula xiriirto tachtaraddaada ama tachtarkaaga qoyska / ama tachaatiirta
qaabilsan daryeelka caafimaadka dumarka. Waxaa kaleetoo kuu furan fursadda aad si toosa ula xiriiri karto xarumaha iyo maamulada saldhigyada
umulisooyinka. Maamulayaasha umulisooyinku waa xirfadyaqaano u
howlgala adeega foosha daryeelka dhalmada, laakiin ma aha takhaatiir.
Waxaa jira maamulo iyo xarumo xafiisyeedo oo u furan macluumaadka,
wacyigalinta iyo la talinta qorshaha qoyska, waliba xaaladaha uurka iyo
xaamilanimada lagala tashan karo (Tixraacid Bogga 53). Maamuladaas
mar marka qaarkood waxey isla shaqeeyaan oo leeyihiin turjubaano. Adeega maamulayaasha tala-siintooda cilmiyeysan waa bilaash, waxeyna la
taliyaashaasi hoos immanayaan sharciguna ku waajibinayaa in ay sirtaada
xafidaan, oo macluumaadka noloshaadana asturaan.
Xilliga uurka iyo xaamilanimada
Xilliga uurka xaamilanimada waxaad galaysaa oo maraysaa kuuna soconaya, baaritaano caafimaad oo kala duwan, oo isdaba jooga iyakoo baaritaanadaas ay u howlgalayaan tachtaraddaada / tachtarkaaga ama umulisada
ku qaabilsan. Qasdiga baaritaanadu waxey u adeegayaan fara-ku-haynta
la socoshada xaaladda uurka marxaladiisu halka ay taagantahay iyo hadii
uurku khatar iyo mushkilad u keeni karo hooyada iyo ilmaha ay caloosha
Hooyada shaqeynaysay waxay sharciga xaq u leedahay 14 usbuuc
dhalmada ka dib boqolkiiba 80 bersenti, qiyaasta dakhligii mushahaaradeedii caadiga ahayd ee dhalmada ka horr ay qaadanaysay in ay hesho.
Haddaba mar hore la xiriir oo ka xog-wareyso arimahaas maamulaha aad u
shaqayso, iyo hadii ay dhici karto in aad ka diiwaangashantahay oo ka
tirsantaha caymiska qaabilsan hooyanimada.
Shirkada caymiska khasnada bukkanku
•Caymisku wuxuu la wareegayaa qarashka todoba baaritaan
oo uurka xaamilanimada, ku saabsan iyo qarashka
baaritaanka masalan sida raajada ilmaha caloosha ku jira
sawiraya loona yaqaan (Ultraschalluntersuchungen).
•Caymisku wuxuu la wareegayaa qarashka tababarka
u diyaar-garowga dhalmada oo ku kaca boqol franki
•Caymisku wuxuu la wareegayaa, qarashka dhalmada,
ama qarashka isbitaalka ee sariir-todobaadeedka dhalmada
ka dib, ama qarashka xarunta dhismaha dhalmada, ama
qarashka dhalmada guriga.
•Caymisku waxuu bixinayaa saddex kulan oo ku saabsan
wacyigalinta naas nuujinta, iyo adeega fulinta baaritaan
xaqiiqsiya oo kasalgaarid danbe ah.
•Caymisku wuxuu la wareegayaa qarashka farsamada
uur iska-soo ridida iyo iska soo xaaqiddiisa.
ku sido. Qarashka howlahaas daryeelka waxaa bixiya oo la wareega
shirkada caymiska khasnadda bukkaanka (tixraac macluumaadka korr
Waxaa dadka waalidka noqon doonaa, oo xilka hooyo iyo aabe loogu yeeri
doono u furan ka qeybgalka tababaro wacyigalina oo la xiriira U diyaargarowga dhalmada. Wixii macluumada, akhbaaro ama wacyigalina waxaad ka heli kartaa tachtaraddaada ama tachtarka dumarka.
Dhalmada iyo foosha
Waxaad Iswiiska ku dhali kartaa isbitaal, ama xarrunta dhismaha daryeelka dhalmada, ama gurigaaga. Hadaba waydii oo ka xog-warayso tachtaraddaada ama tachtarkaaga fursadaha kala duwan ee la heli karo, Haadii
aad doonaysid ama aad jeceshahay waxaa foosha kuu wehelyeeli kara
ninka aad nolosha wadaagtaan ama qof xiriir wanaagsan idin ka dhaxeeyo
ood isku asaxaab-tihiin.
Xaamiladu markay dhasho iyo usbuuca ugu horreeya oo ay umusha tahay,
loona yaqaan Xilliga sarriir todobaadka, waxay umushu xaq u leedahay
xulashada xilliga sariir todobaadka in ay isbitaalka ku nasato, ama xarrunta
dhismaha daryeelka dhalmada, ama ay guriga ku nasato oo joogto. Mud51
dadaas waxaa si joogta ah hooyada iyo cunuga uga warhaynaya, ama soo
booqanaya, kalkaaliyaasha, umulisada iyo takhaatiirtii daryeelka iyo xannaanada caafimaadkooda u howlgalay. Hooyada mudadaas waxaa la siiyaa casharo wacyigalina iyo talooyin hanuunin ah, oo ku saabsan farsamada naasnuujinta iyo tarbiyada xannaanada ilmaha sabiga ah.
Xannaanada ilmaha sabiga ah
Su`aalaha wacyigalinta oo ku saabsan korritaanka ilmaha, raashinka iyo
nafaqada dhallaanka sabiga ah, iyo xannaanada dhallaanka waxaad kala
xiriireysaa xarrunta maamulka la talinta waalidka qaabilsan ee gobolkaaga. (Tixraacid. Bogga 53). Maamulkaas wuxuu fidiyaa adeegyo wacyigalina ee khadka talefoonka, iyo adeegyo uu waalidka guryahooda ku soo
booqanayo, isagoo ka la talinaya oo kala shiraya arimaha xilka waalidnimada iyo qoyska. Xarumaha maamulada waalidka wacyigalintooda u furan waxey isla shaqeeyaan turjubaanada u kala tarjuma dhaqanada kala
duwan is-fahamsiintooda. Intaas waxaa sii dheer adeega iyo fursad siinta
hoyooyinka ilmahoodu wali naaska nuugayo, in ay aadi karaan oo ka qaaybgali karaan kulamada ay soo abaabulaan oo ay soo qabanqaabiyaan isbitaalada iyo maamulada qaabilsan wacyigalinta hooyooyinka ilmahoodu
wali naaska nuugayo, oo loguna falanqeeyo macluumaadka iyo duruusta
la xiriirta farsamada naas nuujinta. Cinwaanada akhbaaraha iyo wacyigalin arintaas ku saabsan waxaad ka heli kartaa maamulka bulshada degmadaada.
Farsamada iska soo ridida iyo iska soo xaaqidda uurka
Sharciga iswiisku waa ogolyahay waana ka raali in uurka iyo ilmaha calloolgalka ah la iska soo ridi karo oo la iska soo xaaqi karo, hadii shuruudaha
qaarkood la fuliyo. Xaamilada ilmo sidka ah, oo uuraysatay waa u madaxbannantahay ichtiyaarna ayey u leedahay in muddada 12-ka usbuuc oo
ugu horreysa uur qaadida in ay si xorr ah u go`aansan karto, haddii uurka
aysan filanayn ay doonayso in ay iska soo riddo oo iska soo xaaqdo. Laakiin waxaa shardiya in ay sharaxaad iyo tafaasiil ka bixiso sababaha ku qasbay ama dhacdada iyo arinta uur-qaadidu ay nolosheeda hallista u galisay.
Ilmaha uurka lagu sidu, laga bilaabo usbuuca 13.-naad hadii uu gaaro, waa
shardi in takhtaradda ama tachtarka cadayn qoraal iyo ruqsad laga haysto
inta aan la iska soo ridin, iyadoo uu ku cadaynayo in dhacdada arrinta iska
soo xaaqidda uurka lama huraan noqotay, oo hadii aan la fulin ay caafimaadka qofka dumarka ah ay khatar culus oo dhanka jismiga iyo quluubta
niyadda kala soo darsi karaan, mashaakilaadna uga iman karo.
Go`aanka iyo guddoonka falka ilmo iska soo tuuridda wuxuu xayaatada
shaqsiga u keeni karaan mashaakilaad culayskooda aan nolosha la xamili
karin. Hadaba waa lama huraan inta ficilka aan lagu dhaqaaqin ka horna
waa, in la helo hannuunin daraasaad wacyigalina iyo talooyin cilmi ku slaysan oo qasdiga arimahaas looga baaran dagayo. Hadaba haddaad u baahantahay gargaar akhbaaro iyo macluumaad wacyigalina kala xiriir xarumaha maamulka talsiinta qorsheynta qoyska, iyo uurka xaamilanimada
qaabilsan. Cinwaanada xarumaha maamuladas ee iswiiska waxaad ka
heli kartaa interned-ka www.isis-info.ch.
• Macluumaad wacyigalina oo ku qoran luqado kala duwan,
kuna saabsan fursadaha gargarrka iyo xuquuqda uurka
xaamailanimada, iyo foosha dhalmada,ama mowduucyo kale
oo ku taxluuqa daryeelka caafimaadka duramarka waxaad
ka heleysaa cinwaaka;
www.migesplus.ch, Rubrik Publikationen > Frau & Gesundheit
• PLANeS – Hay`adda iyo urrurka iswiiska u qaabilsan maamulka
wacyagalinta tarbiyadda isutaga galmada dhadiga iyo laboodka
iyo daryeelka sixada tarmidda caafimaadka qabta / Midowga
urrurka sare ee qaabilsan maamulka talasiinta cilmiyeysan ee
qorshaynta aayaha qoyska, uurka xaamilanimada, tarbiyadda iyo
tacliinta sixada galmada.
www.plan-s.ch, [email protected], Tel. 031 311 44 08 / 021 661 22 33
• Xarrunta wacyigalinta iyo maamulka talasiinta cilmiyeysan ee
iswiiska u qaabilsan arimaha tarbiyadda galmada iyo sixada
tarranka caafimaadka qaba ee bulshada (SRG)
• Maamulka qaabilsan talasiinta cilmiyeysan ee hooyada iyo
Midowga urrurka sare ee iswiiska u qaabilsan maamulka talasiinta
cilmiyeysan ee hooyooyinka SVM
www.muetterberatung.ch, [email protected], Tel. 044 382 30 33
• Urrurka midowga sare ee xirfadyaqaanada umulisooyinka
www.hebamme.ch, [email protected], Tel. 031 332 63 40
• Maamulka talasiinta-cilmiyeysan ee sixadda iyo daryeelka
caafimaadka : Unité mobile de soins communautaires (Umsco)
Rue Hugo de Senger 2-4, 1205 Genève
http://umsco.hug-ge.ch, Tel. 022 382 53 11
GARRGAARKA DARYEELKA CAAFIMAADKA
SPITEX – ISBITAALKA BUKKAN KORMEERKA
Yaan kala xirriiri karaa, haddaan u baahdo, wax gacan
iga siiya xannaanada iyo maamulka guriga gudihiisa?
Xaaladha noocaasa waxaa kaa gargaari kara kalkaaliyaasha caafimaadka
oo u howlgala adeegyada ka baxsan isbitaalka iyo xarumaha caafimaadka
loona yaqaan – Spitex. (Daryeelka isbitaalka bukkan kormeerka). Kalkaaliyaasha xirfadyaqaanada oo cilmiga iyo tacliinta daryeelka caafimaadka ee
isbitaalk kormeerka soo bartay, waxey bukaanada ugu tagaan guryahooda iyakoo ka gargaaraya maamulka howlaha nollol-maalmeedka iyo adeegyada guriga, kana kaalmeynaya sixadda iyo daryeelka caafimaadka.
Adeegyada isbitaal kormeerka waxaa loogu tala galay in ehelada xannaanada bukkaanka u howlgasha uu gacan garrgaar u fidiyo oo howlahooda
ka saacido oo u fudeydiyo.
Spitex-Adeegyada iyo daryeelada uu fuliyo
Waxaad dalabka howlaha iyo adeegyada isbitaalka bukkan kormeerka intifaacooda ka faaiideysan kartaa markii ay dhacdooyin kula soo darsaana
sida, jiro iyo xannuun cudur, ama xannuuno la xiriira da`da cimriga, ama
shill dhaawac, ama mashaakilaad la xiriira uurka xaamilanimada, ama dhalmada iyo waqtiga ku sugnaanshaha marxalada umusha. Howlaha iyo daryeelka adeegyada uu isbitaal kormeerka –spitex-fuliyo waxaa ka mid ah:
Daryeelka iyo maamulka xannaanada ee
Garrgaarka maaulka guriga
• Adeega iftiiminta iyo hurgufidda kala
saaridda arimaha iyo xaaladha howlaha
mugidga ku jira oo isku qassan la kala
cadaynayo, iyo talasiintooda cilmiyeysan
oo ku lifaaqan.
• Gargaarka mayrashada iyo daryeelka
howlaha nadaafadda ee oogada iyo jirka.
• Adeega howlaha diyaargaraynta iyo
maamulka qorshaha daawo qaadashada.
• Adeega daaweynta iyo daryeelka dayactirka
• Taagyeerada garrgaarka iyo maamulka
adeega suuqa wixii guriga looga baahdo.
• Ilaalinta iyo maamulka howlaha nadaafadda
• Maamulka howlaha dharrdhiqidda
• Maamulka howlaha raashin karinta
Inkastoo daryeelka iyo adeegyada uu isbitaal bukkaan kormeerku fuliyo
ay gobolka iyo dagaanka uu ka howlgalayo ay ku xirrantahay, haddana isbitaal bukkan kormeerku wuxuu xattaa fidiyaa, adeegyada bukkaanada
raashin bisil guryahooda loogu geenayo, ama addeega suurtagalinta gaadiidka la raaco hadii loo baahdo, ama adeegyada ka kiraynta qalabka daryeelka caafimaadka ee bukkaanka saacida, sida (masalan, bakoorad-isbitaaleedka, ama qalabka neefsashada iyo hawo qaadashada bukkanka u
sahla, ama gaari kursiyeedka bukkaanka gadiid ahaan u isticmalo).
Waliba gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, waxaa ku sii badanaya urrurada ka tirsan isbitaalada bukkan kormeerka, kuwaas oo masalan xitaa
fuliya adeega howlgalada iyo daryeelka xannuunada la xiriira qluubta iyo
maskaxda insaanka,ama daryeelka cudurka kankarada, ama daryeelka
jirrooyinka iyo cudurada aan laga bogsan oo aan laga raysan. Addeegyada
isbitaal bukkaan kormeerku habab iyo qaabab goboleed kala duwan, ayuu
maamulkiisu u dhisanyahay. Hadaba habka iyo macluumaadka uu isbitaal
bukkaan kormeerka dagaankaaga uga howlgalo waxaad ka heleysaa
Interned-ka ama ka xog-warayso maamulka degmadaada (Tixraacid
•Waxaa caymisku bixinayaa daryeelka iyo adeega xannaanada isbitaal bukkan kormeerka, haddii amarka iyo ruqsada
howshaa lagu fuliyinayo ay ka timid tachtarad ama tachtarr
(waliba sida caadadu ay tahay, qarashka xisaabta iyo
caddadka adeega gaaraya ilaa 60 saacadood oo saddex
bilood gudahoodana lagu fuliyey).
•Caymiska khasnada bukkaanka oo assaasiga ah lama
wareegayo qarashka adeegyada isbitaaal bukkaan
kormeerka fuliyey ee la xiriira garrgaarka maamulka
howlaha guriga .Waxaa jira shirkado caymisyada ka
tirsan, oo daboola qarashyada noocaasa, diyaarna u ah
adeegyadooda caymiska dheeraadka in heshiis lala
saxiixdo. Ka xog-warayso oo wixii macluumaad iyo
akhbaaro faahfaahina kala xiriir caymiska khasnadaada
Midowga urrurka iyo maamulka isbitaal
bukkaan kormeerka iswiiska
www.spitex.ch, [email protected], Tel. 031 381 22 81
DAAWEYNTA IYO DARYEELKA WAAYEELKA
Cimriga waayeelnimada garrgaarkee iyo daryeekee
ayaan heli karaa?
Dadka cimriga waayeelnimada gaara, una baahda daryeel xannaano oo
masalan kaligood aanan noloshooda guriga iskufilnayn oo aan isku-maamuli karin ama eheladoodu aysan xannaanayn karin, ayaa waxaa u bannan
oo ay xaq u leeyihiin da`da cimriga waayeelnimada in laga qaabilo hoydhakhteedka daryeelka waayeelka, waxaana u furan fursadda in iskooda
xarrunta hoy-dhakhtareedka daryeelka waayeelka ay isaga xaadiriyaan oo
iska-diiwaan galiyaan, ama waxaa hoy-dhatareedka waayeelka ka diiwaan
galin kara qayta isbitaalka qaabilsan maamulka samafalka arrimaha bulshada, ama ehelada ayaa la wareegi karta howshaas diiwaan galinta. Aad
bey muhiim u tahay in mar hore la sii sahansado hoy-dhakhtareedka daryeelka waayeelka, madaama boosaska ka bannaan ay qarriran-yihiin oo
meelo badanna isa-sugitaanka safka loogu jiro oo uu aad u dheer yahay.
Hoy-dhakhtareedyaasha qaarkood waxey abaabulaan oo qabtaan shirrar
maalmeed isugu jira kulamo ogeysiisyo la fidinayo iyo soo dhawayn barasho: Kulamadaas waxaa looga waramaa masalan arimaha ku saabsan
daryeelka xannaanada waayeelka iyo qiimaha qarashku inta uu gaarsiisanyahay iyadoo warbixin buuxda la iska siinayo.
Kulamadaas waxaad xaq u leedahay in aad ka hadashid arimaha aad danaynayso iyo codsiyadaada aad xiisaynayso oo shaqsiyana kuu gaarka ah
sida (Masalan raashinka aad doonayso, booqashada ehelada, iyo arimaha
diinta la xirriira iwl) Wixii su`aalo ah, ama macluumaada waxaad kala xiriiri
kartaa xoghaynta maamulka degmadaada ama maamulka curaviva (Tixraacid Bogga 59) kala xiriir helitaanka cinwaanada munaasabka ah oo hoydhakhtareedyada daryeelka waayeelka.
Waayeelka isku filan laakiin u baahan in gacan laga siiyo dhanka daryeelka
daawada iyo maamulka aqalka, ayaa waxaa loogu tala-galay hoy-dhakhtareed khaassa oo watta saldhig daryeel bukkaan socod eegto, iyo hay`ad
qaabilsan oo u howlgasha daryeelka adeega caafimaadka iyo maamulka
guriga sida, masalan isbitaalka bukkaan kormeerka loo yaqaan, (SpitexTixraacid Bogga 38) ama waxaa jira hoy-dhakhtareedyo khaasa oo u qalabaysan loona nadaamiyey qorshaha iyo farsamada daryeelka waayeelka.
Hadaba waqtiga munaasabka ah, iska diiwaan gali oo iska xaadiri. Wixii
macluumaada ama wcyigalina waxaad kala xiriiri kartaa urrurka qaabilsan
Shirkada caymiska khasnada bukkaanka immisa
Caymiska daryeelka assaasiga ah wuxuu la wareegayaa
oo bixinayaa, baaritaanada daryeelka caafimaadka,
daryeelka iyo daawaynta xannaanada caafimaadka ee
hoy-dhakhtareedka waayeelka sharciyeysan oo ictiraafka
aqoonsiga leh. Caymiska daryeelka caafimaadka assaasiga ah, laakiin ma bixinayo oo lama wareegayo qarashyada
intaas ka baxsan, sida kirada maqsinka hoy-dhachtareedka, raashinka iwl.
maamulka daryeelka waayeelka loona yaqaan Pro Senectute (Tixraacid
Hadii adiga ama dhanka ehelada mashaakil kaala soo darsaan dhanka bixinta qarashka hoy-dhakhtareedka daryeelka waayeelka, waxaad arintaas
kala xiriirtaa qeybta maamulka samafalka bulshada ee degmadaada.
Waxaa jira maamul degmeedyo ka qeybqaata qarashka hoy-dhakhtareedyada oo hab tabruc qarashka wax ka bixiya. Arintaas waxaa kaleetoo kuu
bannaan fursadda qoraal codsi oo aad ku dalban karto waxtarka caymiska
kabidda iyo ebyamiyaha, in qarashka lagaa saacido oo lagaa kabo. Deeqda
iyo saacidaada lacagta dheeraadka ah oo lagugu kabayo laguna biirinayo
dakhliga ayaa ah lacagta xaqqa howl-gabka iyo naafanimada loona yaqaan
AHV iyo IV- (Tixraacida Bogga 19) waxaanad heleysaa tabarucaas, marka
xaqqa lacagta howlgabka iyo naafanimada (AHV iyo IV) ay wadajir isugayskooda u dabooli kari waayaan qarashka maciishada nolosha iyo
dakhliga dhaqaalaha nololeed ee daruuriga ah.- Bulshada shisheeyaha oo
dagaan ahaan u soo guuray dalka iswiisaka wa in ay toban sano oo isku
bixisa ku noolaayeen dalka, si ay xuquuq ugu yeeshaan waxtarka caymiska loo yaqaan caymiska kabidda iyo ebyamiyaha.
• CURAVIVA – Midowga urrurada iyo maamulada
hoy-dhachtareedyada daryeelka waayeelka ee
www.curaviva.ch, [email protected], Tel. 031 385 33 33
• Pro Senectute Schweiz – Urruka ku takhassussay
maamulka daryeelka iyo adeegyada bulshada waayeelka ee qaranka iswiiska. www.pro-senectute.ch,
[email protected], Tel. 044 283 89 89
Akhbaaro iyo Macluumaad wacyigalina oo ku saabsan
caymisyaka adeega waxtarka qarash kabida, qaabilsanna
ebyaminta deeqda dheeraadka ah oo tabruca ah.
BUKKAAN AHAY, WAA
MAXAY XUQUUDAYDA IYO
Iwiiska dhacdada markaad bukkaantahay, waxaad leedahay ilaa xad xuquuq iyo waajibaad.
Xuquuqdayda markaan bukkaanad
ama bukkaan ahay
Xuquuqda daryeelka iyo daaweynta xilliga dhacdada la
xannuunsanyahay ama xaaladda cudur iyo jirro lagu suganyahay
Xaaladaha dhacdooyinka gurmadka badbaadada oo ay noloshu ku sugantahay khattar halisa oo ay geeri iyo nollol u dhaxeeyso, waa ku waajib
tachtaradda ama tachtarka in uu daryeelo oo daaweeyo bukkaanka, ama
u diro bukkaanka isbitaalada ama xarumaha maamulka daryeelka caafimaadka qaabilsan oo munaasabka ah, kuna haboon daryeelka bukkaanka ah.
Xuquuqda loo ogolyahay bukkaanku in uu codkiisa ka dhiiban
karo waxna ka go`aamin karo habka loo daweynayo looguna
Hadii aad xannunsantahay waxaad xaq u leedahay in laguu ogaaldo habka
laguu daaweynayo iyo go`amada la xiriira in lagaala tashado, oo aad codkaaga ka dhiiban kartid. Howlgalada daryeelkaaga, ama farsamooyinka
qalitaanada caafimaadka, ama baaritaanada caafimaadka, iyo qaabka
qorshaha iyo farsamooyinka daryeelka laguu daaweynayo, intuba waa in
ruqsadda lagu fulinayo ay adiga kaa timmaado oo ogolaanshahaaga iyo
guddoonkaaga howlaha lagu hirgaliyo. Taa awgeed waa muhiim in tacht60
araddaada ama tachtarkaaga aad wargaliso oo ogaysiiso, hadii ay jiraan
baaritaano caafimaad, ama daryeelo daaweyn, ama farsamooyinka daryeelo qalitaan oo aad ka soo horjeedo aanad diidantahay. Intaas waxaa
kuu sii dheer in aad xaq u leedahay ayna kuu bannaantahay in aad takhtarad ama tachtar labaad la soo tashato si aad aragtida uu ka qabo kana
aaminsanyahay qorshaha howlaha daryeelkaaga caafimaadka iyo fikirkiisa aad u soo ogaato. Taasi waxay ku anfici kartaa oo waxay kaa gargaaraysaa in ay kuu sahasho go`aaminta guddoonka, waliba hadii ay jiraan xallisyo daryeel oo kala duwan, si aad isugu miisaanto oo aad go`aan cad uga
gaari karto xalka daryeelka aad ka soo horjeedo ama kaad ayidsantahay
oo maslaxad in uu kuu yahay aad u aragto.Xuquuqda akhbaaraha wacyigalinta bukkaanka
Tachtaraddada ama tachtarka qaabilsan daryeelka caafimaadkaaga, waa
shardi in uu kuu sharraxo kuuna fassiro oo kaa dhaadhacsiiyo maraxaladaha daryeelka caafimaadka ee kala duwan oo aad mareyso, munaafacaadkooda, khattaraha ku sugan, qarashka dhaqaalaha ay ku kacayaan
baaritaanada laguu soo qorsheeyey, daryeelka farsamooyinka qalitaanada, habka laguu daaweynayo, ama noocyada fursadaha daryeelada daaweynta kale duwan oo jira ama la heli karo lana kala xulan karo. Habkaas
oo qura ayaad ku hanan karta kuna heli kartaa qorshaha fikradaha daryeelkaaga u qalma oo munaasabka ah, oo aanad howsha go`aaminta deryaalkaagana guddoonkeeda uga qaybgali kartaa. Aad iyo aad bey muhiim u
tahay wixii su`aalo ah ood qabtid ammase aad goconaysid in aad soo
bandhigto ood weydiiso si aad si waadixa oo saafiya aad howsha daryeelkaaga caafimaadka aad u fahamtid. sidaas si le`eg ayey muhiim u tahay, in
takhaatiirtu si waadixa ah u fahmayaan su`aalahaaga iyo waxa aad doonayso in aad u sheegto oo ogaysiiso. (Tixraacid: Qaybta qoraalkan ayaa
kuu sharaxaysa turjumaan dhaqameedka, Bogga 65)
Xuquuqda in lagu garab-qabto oo laguu wehelyeelo,
lalana socdo xaalka noloshaada
Xaq baad u leedahay inta aad ku sugantahay isbitaalada iyo xarumaha
qalabeysan ee daryeelka caafimaadka in ehelada ama assaxaabtaada aad
isku dheertihiin in ay kuu wehelyeeli karaan oo aanad la tashan kartid.
Xuquuqda xafidaada iyo ilaalinta sirrta bukkaanka
(Waajibka sirr asturidda)
Shaqaalaha isbitaalka ka howlgala oo idil, macal tachaatiirta, ama gacanyaryaasha saldhigyada tachaatiirta, ama xirfadyaqaanada kale oo ka
shaqeeya isbitaalada iyo xarumaha daryeelka caafimaadka, intuba waxay
hoos immanayaan xeerka iyo sharciyada ka dagsan oo ku waajibinaya xaffidaada macluumaadka iyo qarinta asturaada sirta bukkaanka. Shaqaalaha
isbitaalada ka howlgala waa ka mamnuuc sharciga awoodna uma leh in
akhbaaraha iyo macluumaadka bukkanka, ay qof kale u gudbiyaan. Ruqsadaada iyo ogolaanshahaaga kaliya ayaa xaaladda akhbaarahaga, loogu
gudbin karaa eheladaada ama dadka kuu dhow dhow ood isku assaxaabta
Xuquuqda kuu fassaxaysa in aad ku arki karto diiwaanka qoraalada
iyo faylalka-warqadaha caafimaadkaaga
Xaq baad u leedahay in aad aragto faylka iyo diiwaanka qoraalada ay ku
qoranyihiin xogta-warbixinta iyo macluumaadka daryeelka caafimaadkaaga, iyo waliba in koobiyaal lagaa siiyo oo faraha lagaa saaro.
Qoraal mucaahado oo bukkaanku mustaqbalka habka loo
maamulayo daryeelka caafimaadkiisa uu uga sii dardaarmayo:
•Waa qoraal sharciyeysan iyo mucaahado dardaaran oo khaasa, oo
qoraal ahaan lagu muujinayo, laguna xafidayo bukkanka dardaarankiisa mustaqbalka, habka uu doonayo in daryeelka caafimaadkiisa loo
maamulo lacala hadii uu xannuunsado ama ay dhacdo in shill
dhawac la soo darso.
•Ehelada iyo tachaatiirtu waa in ay sii ogaadaan dardaarankaaga
mustaqbalka, habka aad doonayso in loo maamulo daryeelka
caafimaadkaaga, lacalla hadii ay dhacdo in aad xannuunsato, laakiin
aadan maskaxiyan mustaqbalka isku filnayn oodan ismaamuli karin.
Hadaba kala xiriir oo kala xaajood tachtaradda ama tachtarkaaga hadii
aad doonayso macluumaad iyo akhbaaro arintaas la xiriira oo intaas in
ka badan oo faahfaahina.
WAAJIBKAYGA I SAARAN XILLIGA AAN
BUKKAANADA, AMA AAN BUKKAANKA AHAY
Waxaa kugu waajiba in aad la shaqeyso tachaatiirta iyo kalkaaliyaasha qaabilsan maamulka daryeelka caafimaadkaaga.
Ma dhacday in aad xannunsato oo aad u baahato gargaarka takhaatiirta in
daryeelka caafimaadkaaga ay sugaan, oo ay xaliyaan dhacdada xaaladaas
adigana dhankaaga waxaa lagaa sugayaa oo lagaa doonayaa in aad isku
waajibiso in aad tachaatiirta iyo kalkaaliyaasha u howlgalaya daryeelkaaga
aad la shaqeysid oo dadaalkooda taagyeertid. Tachaatiirta kaligood kama
xil-saarna in xaalada sixadda caafimaakaagu soo wanaagsanaato, ee adiga laftigaagu waa in aad gacan ka gaysato.
•Waajibka la wargalinayo tachtaradda ama takhtarka.
Bukkaanku waa in uu tachaatiirta qaabilsan warbixin buuxda ka siiyo una
sheegaa raysashada xannuukiisa iyo daryeelka sixada caafimaadkiisa
tallaabooyinka uu hadda ka horr ka qaaday iyo hababka caafimaadka uu
horay u tijaabiyey in uu iskiisa wax isugu qabto oo isu daaweeyo. Taasi
waxey ku taxluuqdaa daryeelka bukkaanku iskiisa iyo nafsadiisa u qabtay, ama uu ka warbixinayo daryeelka daawaynta ay tachaatiir kale u
qabteen, ama daryeelka ay u qabteen xirfadoyaqaano isticmaala farsamada dabiibinta iyo daawo dabiiciga (xatta haday wadno kale ku noolyihiin) ama ay jiraan daryeel iyo daawooyin ay hab caafimaad ahaan u qooren (sida masalan, dawooyin la qaadanayo ama la cabayo iwl).
•Waajibka faraya in loo hogaansamo awaamirta iyo tusaalooyinka
Si darajada daryeelka daawaynta ugu suurtagalsan iyo xalka ugu wanaagsan loo gaaro oo loo helo, waxaa shardiya oo dhanka bukkaanka
laga doonayaa oo loogana fadhiyaa, in bukkaanku isku-waajibiyo xeerarka baaritaanada caafimaadka u yaala iyo xeerarka qorshayaasha howlgalada qalitaanada caafimaadka ka dagsan in uu ilaaliyo uuna xaq-dhowro, waliba awaamirta tachaatiirta iyo heshiisyada tallaabooyika
howl-galada daryeelka la isku waafaqayna uu u hogaansamo. Ha ka xishoon su`aalaha waydiintooda wixii mugdi kaaga jira in laguu sharaxo oo
U-foojignaanta iyo ilaalinta xaqdowridda xeerarka iyo sharciyada
nadaamka isbitaalka ka dagsan
Isbitaalada waa shardi ilaa xad xerrarka iyo sharciyada nadaamka u dagsan in la ilaaliyo oo la xaqdhowro. Xeerarka iyo shaciyada nadaamka u
dagsan isbitaalada waxaa bukkaanka iyakoo qoraala ah faraha laga saaraa
bilowga galitaanka bukkaanka isbitaalka lagu qaabilayo, waxeyna xeerarkaas ku saabsanyihiin masalan, booqashada ama xilliyada raashinka.- Wixii macluumaada iyo wacyigalin dheeraada oo ku saabsan xuquuqda iyo
waajibaadka bukkaanka waxaad ka heleysaa iyakoo qoraal ah oo luqado
kala duwan ku qoran cinwaanka: www.migesplus.ch ama cinwaanada
halkan hoose ku xussan.
• Midowga maamulka urrurada bukaanka
www.patientenstelle.ch, Tel. 044 361 92 56
• Urrurka bukaanka iswiiska (SPO)
www.spo.ch, [email protected], Tel. 044 252 54 22
Aad iyo aad bay muhiim u tahay markay arrintu ku taxluuqdo sixada daryeelka caafimaadka in aad wax kasta si fasiixa u fahmaysid adigana si la
mida oo waadaxa laguu fahmo. Laakiin bulshadu kulli ma wada garanayaan luqada oo ma wada yaqaanan.- Badanaa waxaa howsha daryeelka caafimaadka ee saldhigyada tachaatiirta, isbitaalada, ama qeybta samafalka
arimaha bulshada, ama maamulada qaybaha caafimaadka, kala carqaladeeya mashaakilaad iyo dhibaatooyin xagga luqadda ka yimaada iyo is-afgarashowaa.
Yaa ku haboon howsha turjumaada?
•Turjubaanada u kala tarjuma dhaqamada kala duwan ayaa gacan ka gaysan kara, in ay sahlaan is-afgarashawaaga. Xirfadaas cilmi iyo tacliin
khaasa ayey u soo barteen, waxeyna islamarkaas hoos imanayaan
sharciga ku waajibinaya qarinta iyo xafidaada macluumaadka sirta bukkaanka.
•Adeega turjubaanimada waxaa ku soo raaci kara oo kuu soo wehel-yeeli kara qof ka tirsan qoyska eheladaada ama qof aad ku kalsoontahay.
Laakiin assalkeedaba turjubaano-dhaqameedka ayaa howlahaas ku
haboon fulintooda. Waliba turjubaano-dhaqameedka waxey fulinta
adeegaas ku haboonyihiin, markay arimuhu iyo xaajooyinku culusyihiin
oo isku-dhax-qassanyihiin, hoosna loo guda galyo si qoddo dheerna loo
taabanayo xaajooyin ku saabsan shaqsiyadaada iyo xayaatadaada, xogteeda hoose.
Xaq ma u leeyahay adeega turjubaanad ama
turjubaan in la ii qabto?
Jawaabtu waa maya, oo iswiiska xeerka maamulada daryeelka caafimaadka xaq uguma lehid qabashada adeeg turjubaanimo, laakiin isbitaalada waaweyn oo idil waxey leeyihiin adeeg turjubaanimo oo bilaash ah.
Waxaana jira shirkado badan oo turjubaano wanaagsan lagala xiriiri karo,
lagana dalban karo.- (Tixraac macluumaadka hoos ku xusan) Wixii macluumaad faahfaaina oo intaas sii dheer kuna saabsan turjubaan dhaqameedka, waxaad kala xiriiri kartaa adeega khadka telefoonka qaabilsan
• Liiska macluumaadka shirkadaha adeega
turjubaan dhaqameedka, Iskaashatada
qaabilsan adeega turjubaanimada iyo
maamulka howlgalka turjubaaniinta
www.inter-pret.ch > Interkulturelles Übersetzen >
Einsatzvermittlung > Vermittlungsstellen
Tel. 031 351 38 28
• Adeega turjubaanimada khadka talefoonka
Tel. 0842 442 442
Macluumaadka iyo wacyigalinta bulshada
ajaanibta ah iyo mowduucyo kala duwan oo
ku saabsan nolol maalmeedka
www.migraweb.ch –Akhbaaro iyo macluumaad
wacyigalina ee khadka Internedka, iyo talasiin cilmiyeysan
oo afkii hooyo la isku-fahmayo, oo loogu tala galay
ajaanibta iyo bulshada marxaladaha qaxootinimada ku
MACLUUMAAD IYO AKHBARO
LOO TABINAYO LOOGUNA TALA-GALAY
BULSHADA KA TIRSAN KUNA SUGAN
MARXALADAHA QAXOOTINIMADA IYO
BULSHADA AAN JOOGITAANKA
ISWIISKA WARQADO SHARCIYEYSAN U
Daawaynta iyo daryeelka caafimaadka waa xuquuq caaliamiya oo adduunkoo idil ka simanyahay kana tirsan xuquuqaha assaassiga ee insaanka
caalamka ku nool oo idil. Daryeelka caafimaadka iswiiska iyo xuquuqda
insaanka waxey u bannanyihiin oo u furanyihiin bulshada ku sugan marxalaha qaxootiga, ajaanibta u soo guurtay iswiiska iyo bulshada sharciga
joogitannka iswiiska aan lahayn oo loo yaqaano – Sans-Papiers.
Daawaynta iyo daryeelka caafimaadka waxaa ka dagsan xeerarka halkaan
hoose ku xussan.
BULSHADA QAXOOTINIMADA DALBATAY,
AMA BULSHADA HAB KU MEEL-GAARA LOO
QAABILAY, IYO KUWA U BAAHAN
AMMAANKOODA IN LA SUGO
Shirkadaha caymiska khasnadaha bukkaanka ee bulshada qaxootinimada
dalbatey oo watta (sharciga N) iyo kuwo loo qaabiley hab ku meel-gaarnimo oo watta sharciga (F) oo kuna noolaa iswiiska muddo todoba sano ka
yar, intuba gobolka ay ka tirsanyihiin ayaa u xilsaaran maamulka heshiiska
caymiska daryeelka caafimaadkooda.- Heshiiska caymiskaas wuxuu xeerkiisu ku salaysanyihiin habka u dagsan iyo qaabta nooca moodelka
tachtarka qoyska (Tixraacid Bogga 21). Hadaba wixii macluumaada ama
akhbaaro wacyigalina kala xiriir oo ka xog-wareyso maamulka talasiinta
cilmiyeysan ee gobolkaaga, adigoo weydiinaya shirkadda caymiska khasnada bukkaanka ay heshiiska la galeen, lacalla si aad caymiska daryeelka
aad ka tirsantahay u sii ogaato haddii aad mustaqbalka jirato oo xannuun
cudur kula soo darso.
BULSHADA AAN SHARCIGA WARAAQAHA
JOOGITAANKA AAN LAHAYN (SANS-PAPIERS)
•Iyadoo la cuskanayo xeer qarameedka iswiiska ayaa sharci qarameedku
farayaa oo xaqiijinayaa, in qof kasta oo iswiiska ku sugan uu xaq u leeyahay in la gargaaro, hadii ay soo food saaraan xaalado noloshiisa khatar
halisa galinaya oo u baahan badbaado iyo samatabixin. Xuquuqdaas
xattaa dadka bilaa sharciga ah waa u bannaantahay munaafacaadkeeduna waa u furantahay. Isbitaalada iyo tachaatiirta iswiiska waxaa ku waajiba in ay u howlgalaan daryeelka caafimaadka marka ay jiraan dhacdooyinka u baahan gurmadka badbaadada.
•Shirkadaha caymisyada khasnadaha bukkaanka waxaa sharciyan ku
waajiba in bulshada aan waraaqaha sharciga joogitaanka iswiiska lahayn oo loo yaqaano – Sans-Papiers – in ay qaabilaan oo u ogolaadaan
kana diiwaangaliyaan qeybta caymiska daryeelka caafimaadka assaassiga ah oo adeeg-yadiisana u fidiyaan.
•Iyadoo la cuskanayo xeerarka ka dagsan xafiddaada macluumaadka iyo
asturaada sirta shaqsiga, ayaa isbitaalada, maamulada caymisyada daryeelka caafimaadka, maamulada samafalka arrimaha bulshada, maamulada gobolka, ama maamulada kale oo dadweynaha intuba sharciyan ay ka
mamnuuc-tahay macluumaadka sirta shaqsiga, aanan warqado sharciya
wadanka ku lahayn –loona yaqaano bulshada Sans-Papiers-in ay u gudbiyaan akhbaarihiisa waaxda maamulka socdaalka bulshada ama maamulada
kale ee dadweynaha u furan oo u howlgala. Waa maxkamadeyn iyo ciqaab
qaanuun qofka dhaawaca oo jabiya sharciyada ka dagsan xeerarka xafidaada macluumaadka shaqsiga iyo asturaada akhbaarihiissa.
•Bulshada loo yaqaan Sans-Papiers oon wadanka warqado sharciyeysan ku
lahayn waxaa u bannaan oo ay u qoran karaan arji ay ku codsanayaan in
laga dhimo oo laga yareeyo qarashka khidmada caymiska khasnada bukkaanka.
Xirfadyaqaano ku takhassusay cilmiga maamulka caymisyada assaassiga
ah, ee daryeelka caafimaadka ayaa waxey diyaar u yihiin in ay bulshada
aanan wadanka sharciga ku lahayn loon yaqaan SANS-PAPIERS- In ay
wixii su`aala ah oo daryeelka caafimaadka iyo caymisyada khasnadaha
bukkaanka ku saabsan in ay kala taliyaan una sharaxaan oo ka gargaaraan.
Wixii akhbaaro macluumaada ama cinwaano ah, waxaad kala
xiriiri kartaa xarrunta maamulka u furan bulshada aan sharciga wadanka
ku lahayn oo loo yaqaano bulshada Sans-Papiers ama waxaad
macluumaadka akhbaarahaas ka heleysaa khadka interned-ka. Website
nafaqada iyo raashinka sixada caafimaaka leh iyo
aan sokorta lahayn ama aan sokor lagu macaanaysiin. Cadada in yar ayaa caafimaad ahaan la ogolyahay qiyaasta in laga cabo Sharaabka casiirka iyo cabitaanada kofaayiinta leh, ama cabitaanada alkolad...
Somali - Lausanne
Haddii aad rabtid inaad degto Lausanne, waa inaad, siddeed malmood gudeheeda laga bilaabo taariikhda aad timid, iska qortaa Xafiiska kormeerka Deganayaasha (Contrôle des habitants). Waxaad ku qasba...
Koll på pengarna 2015 Somaliska
Anne ayaa ah qofka koowaad ee cuntada mas'uulka ka ah. Iyadaa soo adeegta, go'aamissa wixii la soo iibin la'haa, iyo wixii la karin la'haa. Carruurta way korayaan, oo waxaa intaa dheer maadaama ay ...